ED Recovery Stories 1 - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များ ၁ တွင်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကောင့်များပါရှိသည်။ သင်၏brainonporn.comတွင်စာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာမှပထမဆုံးဖြစ်သည်။
သုံးလအစီရင်ခံစာ။ နှစ်ဆယ်အစောပိုင်း။ “ ကျွန်တော့်ရဲ့ penile sensitivity ကဝန်တွေတိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ခံစားရတယ်။ ”
သင်သို့မဟုတ်အခုကအနည်းဆုံး3လကြာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲရောက်ခဲ့ဖူးသော်လည်းငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အကူအညီနှင့်အတူအတော်လေးအကြိမ်အနည်းငယ် orgasmed ရှိသည်ဟုသတိထားမိမကျမည်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် (ငါအစောပိုင်း၌ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် M ကိုရှိစေခြင်းငှါထင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့လုံးဝ porn အဆင့်) ။
ကျွန်မတို့ဟာတစ်ပတ်လောက်လိင်မဆက်ဆံခဲ့ကြဘူး၊ ပြီးတော့သူမနောက်ဆုံးညမှာသူမလိုချင်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ငါလိုချင်ပေမယ့်ငါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးအခမဲ့ဖြစ်လိုသောကြောင့်ငါမျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမသည်ငါနှင့်အတူကစားစတင်ငါအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းစတင်ခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်တကယ်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလောက်များလွန်းလို့ငါ O, အရမ်းရယ်ရတယ်။
ငါအလွန်ဆိုးရွားလှသည့် P စွဲလမ်းမှုနှင့်အားနည်းခြင်းများမှတစ်ဆင့်သူမအားလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုလိုဟုမခံစားရကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ သူမကတကယ်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့် OMG ကအရမ်းခံစားရတယ်။ ငါအရာအားလုံးကိုခံစားနိုင်ပြီး, ကြီးလှ၏။ သို့သော်ဤအကြောင်းကြောင့်ငါတစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းကြာခဲ့သည်။ ဟားဟား။ ငါတကယ်တစ်ချိန်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ (ငါတို့မှာလိင်အင်္ဂါတွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပျော်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှခက်ခဲ / မဖွင့်ဖူးဘူး။ )
လိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအရမ်းကိုကောင်းလာနေပါတယ်။ တကယ်တော့ငါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးသွားပြီ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ penile sensitivity ကဝန်တွေတိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားသလိုခံစားရတယ်။ ငါဒီရိုက်နှက်ဖို့ခြေလှမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရတယ်။
နောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို M မလုပ်သော်လည်းငါ့ရှေ့တွင်ငါ့ g /fသည်ငါနှင့်အတူကစားသည်။ ဒါကြောင့်ငါခံစားချက်ကိုပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် wow! ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်ရှိသည်၊ ဒါက P. ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ရုံပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်တွင်ဒီဟာသေချာပေါက်အလုပ်လုပ်နေတယ်။
ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်ရှက်ရွံ့မိသည်။ အခြားသောလမ်းများနှင့်ဝေးလွန်းသောခရီးကိုမသွားချင်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုလက်ခံရန်အတွက်၊ ဤသည်လုံးလုံးခက်ခဲခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ခြင်းကိုစိုးရိမ်လိမ့်မည်။
[၅ လ] ကျွန်ုပ်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီဟုယခုလုံခြုံစွာပြောနိုင်ပြီ လိင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောအကျင့် ဘောလုံးတစ်လုံးပါသောလူတစ်ယောက်သည်၎င်းကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ပါက [သူသည်အစောပိုင်းသားအိမ်ကင်ဆာအတွက်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သည်] ။ ညဥ့်အခါမှာတော့အဲဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး တနည်းကား,
ငါ porn မကြည့်ဘူး
ငါ porn မတပ်ချင်ဘူး
ငါ PIED ခဲ့ကြောင်းတစ်လပြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ NOFAP ကို ​​၂၅ ရက်သွားခဲ့တယ်။ အခုငါအခုဇနီးနဲ့ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီ။ အဆင်ပြေတယ်…
ဒီ S ကအလုပ်လုပ်တယ်
ငါ Pornfree ဖြစ်နေပြီ၊ ရက်သတ္တပတ် ၃-၂ ပတ်ခန့်အကြားတွင် fap မရှိခဲ့ပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူမရှိခဲ့ပါ။ သာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲသောတစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာနံနက်အချိန်၌ဖြစ်သော်လည်းငါမူကားယနေ့ညလိင်ဆက်ဆံပြီးအလွန်ခံစားမိသည်။ အခုတော့ကျွန်မရဲ့အမှားတွေစဖို့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှာကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအခါသူမအော်သံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ သင်လဲလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖုန်မှုန့်တွေပြန်ပေါ်လာပြီးလမ်းဆက်လျှောက်သွားပါစေ။ ငါဒီလမ်းကြောင်းကိုရပ်တန့်ဖို့မစီစဉ်ဘူး။
ဤရွေ့ကားအသက်နှစ်ဆယ်နှစ်ပေါင်း porn စွဲထားသူတစ်ဦး၏သဘောထားမှတ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဤသည်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ရှက်စရာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ငါဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့စိုက်ထူအားနည်းခြင်းနှင့်အားနည်းလာပြီနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းသွားပြီခဲ့သည်။ ရုံမခက်ခဲရုံအနိုင်နိုင်ဒါအကြိမ်တွေအများကြီးပေမယ့်ကျွန်မရဲ့စွဲသွားနေခဲ့တယ်။ ငါပိုဆိုးငါ၏အပြဿနာတယ်, ပိုကျွန်မအချိန်များတွင်ထဲသို့နစ်မြုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ဒီစွဲလမ်းရပ်တန့်ကြိုးစားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်ပဲထွက်စတင်နေကြသည်နှင့်အများဒါမှမဟုတ်သူတို့စိုက်ထူပြဿနာများရှိခြင်းနေကြသည်ထင်တဲ့သူရှိသူတို့အားထွက်သည်။ ငါမဆိုပိုပြီးအဘယ်သူမျှမစိုက်ထူအစှမျးသတ်တိပြဿနာများရှိသည်!
ဒါဟာရှက်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒီညငါနှစ်နှင့်နှစ်များတွင်ခဲ့ကြအင်အားအကောင်းဆုံးစိုက်ထူဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေသောစဉ်အချို့မကြာသေးမီကခဲ့ကြပေမည်ဘယ်လိုသေချာမသိ။ ကျွန်မသတိထားမိပါပြီမြား၏, ဤကဲ့သို့သောက, ငါပဲနောက်တဖန်တစ်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ငါသညျလညျးဆိုသညျကားရန်ရှိသည် ငါကမကြိုက်ပါဘူး။ ယင်းမတရားသောအခုကဲ့သို့ဆိုးရွားငါသည်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ခွန်အားနှင့်ပတ်သက်ပြီးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
တကယ်တော့တစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းပြုံး။ ငါသည်ငါ့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကငါလုပ်ခဲ့တယ်အပေါငျးတို့သအလွဲသုံးစားမှုမှထမြောက်နိုင်ရုံဝမ်းသာတယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ကဆိုပါတယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အတူငါတကယ်ချငြိမ်သက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါလမ်းလည်းမြင့်မားသောဖြစ်ကြ၏မတရားသောနှင့်ရမ္မက်ကိုဆိုလိုတာ။ ဒီညငါနေဆဲအိပ်ပျော်ခြင်းမှရနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အိုးကောင်းကောင်းငါဆိုပါစို့ဆိုးအတူကောငျးမှယူပါလိမ့်မယ်။
51 မှာကျွန်မရဲ့ပညာရေးများအတွက်အဖြေကိုရှာကြံဆရာဝန်ထံသို့သွားလေ၏။ သူကကျွန်တော့်ရဲ့လိင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းအနည်းငယ်မေးခဲ့ပြီးနောက် "ဒါကအားလုံးမင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲ" လို့ပြောခဲ့တယ်။ အိုး, ဒီမတိုင်မီလအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏သွေးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အခြားဟော်မုန်းများသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
သူကကျွန်တော့်ကို Viagra နမူနာအနည်းငယ်ပေးပြီး“ ငါ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရစေတယ်။ ” ဒါပေမယ့်သူကငါပုံမှန်ဆေးအဖြစ်ငါယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူမခံစားခဲ့ရကဆိုသည်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လကပါ။ ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သက်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ဒီဖိုရမ်မှာတခြားသူတွေဆီကနေကျွန်တော်လေ့လာသိရှိခဲ့တာတွေ၊ ညစ်ညမ်းစေတဲ့ ED ကွင်းဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားဆောင်းပါးတွေကမှန်ပါတယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ (ညစ်ညမ်းသောဆေးစွဲခြင်း) မှကျွန်ုပ်သည်ရက်အနည်းငယ်အကွာတွင်ရှိနေပြီးထူးခြားသောတိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူတဖြေးဖြေးကခုန်နေတာကငါ့ကိုပူလာပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ငါ၏စစ်သူရဲသည်လည်း၊
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကဒီဖိုရမ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်း, nofap နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ PIED ကုသလူတွေအကြောင်းကိုပို့စ်များကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်, ငါကတစ်ဦးပါအပ်ပေးတော်မူ၏။ Ive pron အားလုံးကိုငါ့အသက်ကို fapping ခဲ့တာ။ နီးပါးနေ့စဉ်။ ကတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲကြောင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ခံတွင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခဲ့ပေမယ် / လိင်ကကောင်းကောင်းမသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မကြာခဏစိုက်ထူဆုံးရှုံးမယ်လို့ရှိခြင်းကွန်ဒုံးအပေါ်ချပြီးသည့်အခါ။ ငါကသွေးပေါင်ချိန်, သွေးကြောယိုစိမ့်, မုန့်ညက်အချိန်ကိုက်, ဗီတာမင်ချို့တဲ့, etc စိတ်ဖိစီးမှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိမ့် testosterone ဟော်မုန်း, နေရောင်အောက်တွင် Pretty အများကြီးအရာအားလုံးခဲ့သည်ထင်။ ငါတောင်မှ cialis နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့ dabbled, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံအဲဒါကိုတကယ်မယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ wasnt ကြောင်းညွှန်ပြသည့်အလုပ်အကိုင်အပြု wouldnt ။ အခုတော့တကအလေးချိန်နဲ့တူခံစားရသည်ငါ့ထံမှရုပ်သိမ်း, ဤစစ်တိုက်ငါ့နောက်သို့ဖြစ်ပါတယ် သိ. အံ့သြဖွယ်ပါပဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အပြုသဘော PIED ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - ငါကပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီလော
ငါအခု ၈၂ ရက်ရောက်နေပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကငါ P နှင့် F မပါသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှိုးဆွမှုမှတဆင့်စိုက်ထူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာအတွေးများလုံးဝမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းခံစားမှုကိုပြုလုပ်သည်။ ငါကြိုးစားတိုင်းအချိန်တန်လျှင် ၈၅ မှ ၁၀၀% ကြားအထိမာကျောမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသင်းသားသည်ထိုတွင်ထိုင်။ ပင်သက်မဲ့ (အတော်ပင်သက်မဲ့မဟုတ်) ။ ထိုမှတပါး, ထိုစိုက်ထူဒါဟာမထိမီတစ်မိနစ်ကျော်ဒီတော့သို့မဟုတ်ဒီတော့ - ဒါကြောင့်မထိဘဲဆက်ပြောသည်။
အခုငါတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ် PMO အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအမြင့်တွင်ကြိုးစားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုပင်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး ၂၀-၃၀% သော max နှင့်တူသည်။ ဒါဆိုဒါကငါ PIED ရဲ့အဆုံးနီးပြီလားဆိုတဲ့လက္ခဏာလား။
ငါမကြာမီ SO နှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လာပြီ, ငါဖြစ်နိုင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ED မူးယစ်ဆေးဝါးများမရှိဘဲငါ့အသက်တာ၌ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အဖျော်ဖြေနိုင်မနိုင်ကြည့်ဖို့! ဒါဟာalရာမပါလိမ့်မယ်။ ငါ ၉၀ နောက်ပိုင်းမှာစောင့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနofapကိုငါခဏလောက်ထက်ပိုပြီးအကောင်းမြင်တယ်။
အတွေးတစ်ခုတည်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဇာတိ၌လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတွေ့သောအခါ - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုစဉ်းစားသည်။ ယောက်ျားအများစုအတွက်ပုံမှန်လား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါဒီလိုမြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖိအားများလွန်းတာလားဆိုတာငါ့ကိုသိပါစေ။
ငါနှင့်နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမိန်းကလေးနှင့်ဖြစ်သည်။ သူမသည်စာသားတစ်အိပ်မက်ခန္ဓာကိုယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတသမတ်တည်းမတက်နိုင်ဘူး။ ယခုမှာ (NoFap ၏ ၄၅ ရက်အကြာ) သည်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ စာသားကချမထားနိုင်ဘူး။ NoFAP က ED အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
ငါဘယ်လောက်ယောက်ျားသူတို့ရဲ့ porn ဘဝများနှင့်၎င်းတို့၏ ED နှင့်ချိတ်ဆက်မှုမလုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2bk0i2/on_day_45/cj657zd
ငါနေဆဲတချို့လူတွေက porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခုခံကာကွယ်ဘယ်လောက်မှာမိန်းမောတွေဝေရ။
ယောက်ျားတွေ / R / Sex ကိုသူတို့ကအားလျော့နေတယ်လို့အမြဲတမ်းတင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ PIED ကောင်းတယ်၊ PMO ကဘာမှမကုသနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါက porn လိုဖြစ်လိမ့်မယ်။
တချို့ယောက်ျားတွေ Porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျန်းမာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုနှင့်ညစ်ညမ်း masturbating သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်မရ ED ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားရှိကွောငျးအခြို့သော shit ရေးသားဖို့ရှိတယ်လို့သော်လည်းဒါဟာပျက်ကွက်ခဲ့ပါဘူး။
ငါမရကြဘူး၊ ငါဒီမှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်၊ PMO ကိုငါရှောင်တာ၊ ဒီလူတွေကခုခံကာကွယ်တာကိုအရမ်းစွဲလမ်းတာကြောင့်ငါကိုယ်တိုင် ED အတွေ့အကြုံရှိတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် Limp ဘယ်လောက်စုပ်သည်နှင့်လက်သီးလက်ကိုကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသောယောက်ျားများမျှော်လင့်မိသည်။
ဤရွေ့ကားညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ 20 ရက်အကြာမှာလူငယ်တစ်ကောင်လေး (အစောပိုင်း 10s) ၏သဘောထားမှတ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
သမိုင်း:ငါမှာ ED ပြproblemsနာမရှိသလောက်ဖြစ်ပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာအော်ဂဇင်ကိုမကြာခဏမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကငါ့ကိုဒီကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အခြားပြissueနာတစ်ခုကတော့ကျွန်ုပ်လိင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံရပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါသည်လည်းနံနက်ထင်းဘူး။ ငါဒါအများကြီးစဉ်းစားထားဘူး, ဒါပေမယ့်ပုံဒီအလွန် PMO ၏အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ငါရက်အနည်းငယ်ကနောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးလိင်စဉ်အတွင်းခံစားမှုမှတ်မိထက်ပိုပြီးနှိုးဆော်ခြင်းခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူယခင်ကထက်ပိုမိုနူးညံ့ခဲ့ငါကွန်ဒုံးနှင့်အတူအော်ဂဇင်ပြုလေ၏ ... ငါ့အဘို့ကြားဖူးဖြစ်သောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်နည်းနည်းအချိန်မတန်မီ။ ကျပန်းယောက်ျားတွေရဲ့စိုက်ထူမှုတွေအကြောင်းကြားရတာကိုသင်ငြီးငွေ့သွားမယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသံသယဝင်နေပေမဲ့လည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုအလျင်အမြန်သတိပြုမိခြင်းကအရမ်းပျော်တယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းထဲသို့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာနေစဉ်၎င်းတို့သည်နှိုးဆွမှုနည်းလာပြီးအနည်းငယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်လာသည်။ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖြစ်ပျက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သိသော်လည်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့တစ်ခါမှမကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူး။
ဤရွေ့ကား porn HOCD စွဲခဲ့ပါတယ်နှင့်အမှန်တကယ်နောက်ကွယ်မှ porn ကိုယ်တိုင်ကစွန့်ခွာဖို့ရုန်းကန်ခဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးယောက်ျား၏သဘောထားမှတ်ချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
ငါနောက်ထပ်သုံးပတ် PMO အခမဲ့သွားနိုင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါ့ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံငါ့အချိန်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါသဘောကျပေမယ့် ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိပုံမှန်အနားမယူချင်ဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာတော့အရာရာတိုင်းဟာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိလိုက်ပြီး၊ လိင်ကိစ္စဟာငါကြိုက်တာတွေထက်အများကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆုံးသတ်သွားတယ်၊
ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ပတ်ပေရေနေဆဲခေါင်းကိုက်နေဆဲ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးဤညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်အားလုံး၏ပုံရိပ်များကိုရရှိသောကြောင့်ငါမကြိုက်ပါ။ ငါသူတို့ကိုငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလျစ်လျူရှုရန်ကြိုးစားသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတိုးလာသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်အသည်းအသန်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းနေစဉ်တစ်ညတည်းခို။ စိုက်ထူရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ အခုတော့ကျွန်မရည်းစားနဲ့အတူသူမကိုနမ်းတာကနေရုန်းထွက်နိုင်ပြီ။ ၎င်း၏ကျိန်းသေတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့သည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ် ဦး တည်းတတ်နိုင်သမျှထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါပြောရမယ်၊ ခုခံကာကွယ်ဖို့ငါတည်ဆောက်လိုက်တာအခုခုခံတွန်းလှန်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသွားပြီ။
ဒီအကောင်လေး (အသက် 34) တစ်ဦးပြင်းထန် porn စွဲပြီးနောက်, ganja သုံးပြီးပင်စဉ်ရပြန်လေ၏။
ဘယ်သူ့ကိုမှစွဲလမ်းမှုပိုဆိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးသာမှုတွေကကျွန်တော့်ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှဒီစာကိုဘယ်သူဖတ်ပြနေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ငါဖတ်ခဲ့တဲ့ရာနှင့်ချီသောရေးသားချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်အဆိုးရွားဆုံး ၅% ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ ငါကဲ့သို့မကောင်းသောတစ်စုံတစ် ဦး အကြောင်းဖတ်ခဲသည်။ ၎င်းသည်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်စရာမရှိ။ ... အမှားမလုပ်ပါနဲ့။ တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်ခက်ခဲပါတယ်။
နီကိုတင်းမှအရက်နှင့်အခြားအရာ ၀ တ္ထုများ - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုအနည်းငယ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ကိုငါကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီ၊ အဲဒါကအခက်ခဲဆုံးပဲ။ မျှော်လင့်ခြင်း၊ အရူးအတွေးများ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးမရှိခြင်းနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများစွာသည်ဤ p နှင့် m ကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်အရာများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘ ၀ မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာရောဂါပျောက်ကင်းစေရန်စဉ်းစားရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိချိန် မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းအောင်၊ အလှဆင်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ငါမှတ်မိနိုင်သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်ပါတယ်။ Ganja နှင့် ED အကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုထင်မြင်သူများနှင့်ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူပါ။ ... ငါရိုးရိုးသားသားစွန်ကံကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်လုပ်သမျှအားလုံးကကျွန်ုပ်အား ပို၍ ချိုသာစေခဲ့သည်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီးတဲ့နောက်သူမနှလုံးသားထဲမှာရင်ခုန်သံတွေထပ်ခါတလဲလဲပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကွန်ဒုံးကိုအချိန်တိုင်းသုံးခဲ့တယ်။ အရင်ကကွန်ဒုံးနဲ့ပြproblemsနာရှိခဲ့တယ် ငါကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစိုးရိမ်စိတ်လို့အမြဲတမ်းထင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားခဲ့သမျှအရာအားလုံးလိုပဲ၊ တကယ်မမှန်ဘူး!
အကြောင်း7yrs လွန်ခဲ့တဲ့ကြှနျုပျ၏မယားသည်ငါနှင့်အတူလိင်စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်ပါတယ်။ ငါအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်နာကြည်းလျက်ရှိပေမယ့်သူမအတိုးအကြှနျုပျ၏ ED ခဲ့ဆုံးရှုံးသွားသောစစ်မှန်တဲ့အကြောင်းပြချက်သိတယ်ပါပြီ။ ငါပြောင်းလဲပစ်ရန်သို့မဟုတ်ဘဝကိုမခံနိုင်သောဖြစ်ဆက်လက်မယ်လို့ခဲ့သိတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့် nofap စတင်ခဲ့သည်။7ရက်အကြာမှာဇနီးနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်သူမတကယ် climaxed ။ ဒါကသူမ၏အကျိုးစီးပွားတယ်။ တစ်ရက် 14 တွင်ငါတို့သည်တဖန်ရငျးနှီးခဲ့ကြသူအများအပြား orgasm ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်နောက်တဖန်စိတ်ဝင်စားသည်နှင့်တူသူမနောက်တဖန်စိတ်ဝင်စား feeling ကပြောပါတယ်။ အရမ်းရယ်ရတယ်နှစ်ပေါင်း ed အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုသာတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာပြဿနာကြီးကြောင်းငါ့အဘို့သည်ကြီးစဉ်ကကျွန်တော့်ဇနီးလိင်အတွက်အသစ်တခုအကျိုးစီးပွားရှာတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ FAP မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပေမယ့်ကိုယ့်ကိုထပ်သူမ၏ကမ္ဘာကြီးကျောက်နိုင်ပါတယ် သိ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလိုလိုကျလှနျးခွငျးအပျြောအပါးတစ်အခိုက်အဘို့ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအလွန်းကောင်းသောခံစားရပါပြီ။
ဤပိုစတာသည်အခြားပိုစတာ၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုသည့်လူ၏မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ မေးခွန်းမှာ“ abstinence သည် porn-induced ED အတွက်အလုပ်လုပ်သလား။ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးလိင်စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ”
သင်သည်အစပိုင်းတွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည့်အခါသိသောပြknownနာဖြစ်သည်။ ငါ့အဘို့က 2-3 ပတ်ကြာခဲ့သည်။ တချို့အတွက်တော့ကြာတာပေါ့ လူတိုင်းက၎င်းနှင့်ကပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ အရေးကြီးသောအပိုင်းမှာအချိန်မတန်ဘဲအရှုံးမပေးရန်ဖြစ်သည်။
ပြန်ဖွင့်များ၏သက်ရောက်မှုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြ၏။ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပြီးနောက် flatline ကာလကြုံတွေ့ပေမယ့်ယခုရှိသမျှတို့ကိုငါနေ့ရက်လားနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ငါလာသောအခါအမြိုးသမီးမြားန်းကျင်ယဉ်ဖို့ရှိသည်တိရစ္ဆာန်နဲ့တူခံစားမိပုံရသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်မအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်လိင်ကာလအတွင်းတစ်ဦးအစိုင်အခဲစိုက်ထူရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိသည်။ ဤသူသည်ငါ months ago 1-2 ခဲ့တူသောအမာခံညစ်ညမ်းမှတစ်နှစ်ခွဲ-စိုက်ထူလိင်တံ stroking ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်ဆန့်ကျင်နေသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အသေများနှင့်အခြားဒြပ်ပေါင်းများသည် libido တိုးမြှင့်ရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ Zinc နှင့် Tribulus ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အနည်းဆုံးအရက် / မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူအထောက်အကူပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားလုပ်နေတာတွေကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုဆီသို့ ဦး တည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားကွာ (မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်ထံမှ) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းနေသူ့ခရီးကိုဖော်ပြရန်ဖို့တောင်းခံရမယ့်ယောက်ျား၏သဘောထားမှတ်ချက်များမှာ
ကောင်းပြီဒီခရီးကိုကျွန်တော်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကမလုံခြုံမှုအချို့ကြောင့်ပါ။ ငါခွဲပြီးပြီးနောက်ချက်ချင်းဤ site သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါသုံးနှစ်ကြာခဲ့သည်သောဆက်ဆံရေး။ ဒါဟာငါ့ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည် .. ငါ့နောက်ဆုံးတ ဦး တည်း။ သို့သော်လည်းငါသည်အပျိုနေဆဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာရှိတုန်းကငါ့မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိပြီးစိတ်ပူစရာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေခဲ့ဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်နည်းနည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိပြီးအနှစ် ၂၀ အတွင်းအပျိုစင်ဘ ၀ တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ တွင်အပျိုစင်ဘ ၀ ကိုအဘယ်ကြောင့်ရှိနေသေးသနည်းဟုတွေးမိသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားတိုင်း (ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃ ကြိမ်သို့မဟုတ် ၄ ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်) ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်
သူမဆီကအများကြီးအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါလိုချင်တဲ့နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုလည်းမရခဲ့ပါဘူး။ ထိုအခါငါတကယ်ကဒီမိန်းကလေးကိုချစ်၏။ သူမကဲ့သို့လောက၌မည်သူမျှငါ့ကိုမလှည့်။ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံဖို့အချိန်တန်ရင်ငါအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး အဲဒီမှာစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်တွေအများကြီးကျိန်းသေရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် porn ကျိန်းသေတစ်အခန်းကဏ္ played မှပါဝင်ခဲ့သည်။ ငါမအောင်မြင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာစိုးရိမ်စိတ်ကပိုဆိုးလာတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED သို့ ဦး တည်သွားသည်မှာသေချာသည်။ ထိုအခါငါကဒီမှာဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငါ porn ၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလုံးဝ desensitized ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့သည်။
ငါလမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းတကယ်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုဖြတ်ခြင်းသည်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတလေနံနက် / ညသစ်သား မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်သည်ခဲယဉ်းရမည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်порမပါဘဲခက်ခဲစွာရနိုင်သကဲ့သို့ခံစားချင်ခဲ့သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးပထမအပတ်အနည်းငယ်မှာ၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကအလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့၊ မဖြစ်၊ စိုက်ထူမှုမရှိဘဲငါမပြောနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျနော့်ရဲ့စိတ်ကူးဟာလိင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အစစ်အမှန်ဘ ၀ မှာသိခဲ့တဲ့မိန်းကလေးစစ်စစ်တွေအကြောင်းတွေးတောခြင်းကကျွန်တော့်ကိုခက်ခဲစေလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းပျော်ရွှင်စေတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ခြင်းကကျွန်ုပ်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်သည်။ ၄ လလောက်ကြာရင် porn မပါဘဲငါနေကောင်းလာပြီ။
အစပိုင်းမှာတော့ဒါဟာခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာအစီအစဉ်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်စိတ်ရှိလာတိုင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးစာဖတ်ခြင်းနှင့် PE နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုဒီဆိုဒ်ပေါ်မှာသုတေသနပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့တွန်းအားကစလာပြီးအခုဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့မခံစားရတော့ပါဘူး။ ငါတကယ်ဘဝကိုမကျေနပ်သောအခါငါဘာတွေမဟုတ်လဲ၊ သို့မဟုတ်ငါမချိုသာရင်တောင်ချိုသာချင်ရင်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အားအားကစားနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကဲ့သို့သောအခြားအရာတစ်ခုကိုအာရုံပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ထိုစိတ်ဆန္ဒများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုအထိငါ၏အအောင်မြင်မှုနှင့်အတူတကယ်ဝမ်းသာတယ်။ ၆ နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ၄ လထက်ပိုကြာမည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်စိန်ခေါ်မှုတက်သည်ဖြစ်၏။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကျိန်းသေထိုက်သည် ထိုအခါငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လူတိုင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှ။ ကံကောင်းပါစေ၊
သငျသညျ reboot နေချိန်မှာတောင်မှအမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်, အားလုံးစိတ်ကူးယဉ်ရှောင်ရှားရန်အကြံပြုသူ။ ဒါဟာသူ3ရက်သတ္တပတ် reboot မလုပ်ပဲပုံပေါ်ပေမယ့်တကယ်တော့နှစ်ခုသီးခြား 21 နေ့ကကာလလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ (မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်မှ)
ကြိုတင်မဲအတွက်ရှည်လျားသော post ကိုများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကကူညီစေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုရှိယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပြီဤအမှုကိုရိုက်နှက်ဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဒီဖြစ်ပါသည်။ ငါရပ်တန့်ယဉျလို့ပြောတဲ့အခါသင်ငါလိင်မှဆက်စပ်အရာအားလုံးကိုမှာရှာဖွေနေရပ်တန့်ဆိုလို, ခဏကူးယဉျကိုရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်။ သငျသညျမှရှိပါကအမျိုးသမီးတွေမှာရှာဖွေနေတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်သင်မေးနိုငျသလဲ ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲနေခြင်းသင့် ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၊ သင်တို့အချို့သည်သတိထားမိနိုင်သကဲ့သို့သင်၏ ဦး နှောက်၏ dopamine ကိုသင်စွဲလမ်းသောအခါအားလုံးသည်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပြ,နာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒီတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ porn နဲ့ MB ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သျောလညျးငါရှာတွေ့သောအရာကိုငါမိန်းမတို့ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါသူတို့ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါကဖြစ်စဉ်ကိုအကြီးအကျယ်နှေးကွေးစိတ်ကူး။ အကယ်၍ စာပေများကိုသင်ဖတ်ပါက dopamine ပမာဏအနည်းငယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန် (ဥပမာချောကလက်ကိတ်မုန့်တစ်ထည်လိုချင်ခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင်ကိစ္စများတွင်) အနည်းငယ်သာထုတ်လွှတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရလိမ့်မည်။ ယင်းကတိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ဤသို့ပြောပါ၊ ဆေးလိပ်မသောက်လျှင်သို့မဟုတ်အရက်ဖြတ်လျှင်သူတို့၏ကွန်တိန်နာများကိုတစ်နေကုန်စိုက်ကြည့်မည်လော။ ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်, သူကသွေးဆောင်မှုကိုဖန်တီးသောကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာတူညီတဲ့အလုအယက်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ မင်းပုံမှန်အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးညစ်ညမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေထဲမှာမြင်ယောင်နေတုန်း p နဲ့ mb နုတ်ထွက်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်မင်းမြင်နေရပြီ
ဒါဆိုငါဘာရတာလဲ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်က“ အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းမှု = လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှု” (medhelp ခေါင်းစဉ်များ) နှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူစာမူကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည် (ယခုအချိန်တွင်အဖြေ ၂၈ ခု) အသုံးပြုသူစုံတွဲတစ်တွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြhadနာရှိခဲ့သည်။ သူတို့၏နည်းဗျူဟာမှာရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လုံးလုံးလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆိုကြည့်ခြင်း၊ လုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အတွက် ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အတွင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်ငါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့“ ပျောက်ကင်းသွားပြီ” လို့ထင်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ အခုငါဒီမဟာဗျူဟာကိုပြန်သွားပြီ။ ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲ
ကျွန်မဘာမျှမကြည့်ရှုသည်အနည်းဆုံး 14-21 နေ့ရက်ကာလအဘို့မရှိ, စိတ်ကူးယဉ်, အမျိုးသမီးများမရှိပုံများ, ငါပင်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုမဆိုအပြင်ဘက်နှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးချင်ခဲ့သောကြောင့်, ငါသညျဤအမှုကိုပြု၏။ ကခက်သလား လုံးဝ! အလွန်ခက်ခဲလုံးဝစုံတွဲတစ်တွဲပတ်ရှောင်ကြဉ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါက porn အတွေးများကိုငါ့ဦးခေါင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားမှခွင့်ပြုခဲ့သလိုခံစားရတယ်, ကငါ့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကကူညီပေးခဲ့ခံစားရတယ်။
ငါ့အတွက် p နဲ့ mb ကိုဖြတ်ရုံက ၁၀၀ ရာနှုန်းလောက်တော့ဖြတ်မသွားဘူး။ ဒါဟာအသက်ရှင်လျက်စောင့်ရှောက်သောစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ နှစ်ခါစလုံးငါဒီနည်းလမ်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့လိင်စိတ်ကခဏပျောက်သွားသလိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့ရုတ်တရက်သူပြန်ရောက်လာတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမှ ကြီးခံစားရတယ်
ဒီဟာတခြားလူအားလုံးအတွက်အလုပ်လုပ်မှာလား။ ငါတကယ်မသိဘူး ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားချည်ထဲမှာဖတ်ပြီးတစ်ခုခုအကြံပြုတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါသောက်နေချိန်မှာလည်းထပ်ထည့်ပါမယ်။
အသက် ၂၂ နှစ်၊ ငါးပတ်မျှ PMO (စုစုပေါင်း) မရှိပါ။ ညစ်ညမ်းသော ED မှငါးပတ်အတွင်းပြန်လည်နာလန်ထူရန်ရှားပါးသည်။
1st post - ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မှစ၍ တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်လေးကြိမ် PMO ကိုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် gfs ၂ ခုမှတဆင့်တစ်ခါတစ်ရံ ED ရောဂါခံစားခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချိန်ဇယားကိုရှာရန်ရေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ PMO မပါ ၀ င်သည့် ၂၂ ရက်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားမရှိပါ။ ငါကြီးမြတ် libido ခဲ့ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်ဆိုလို။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ဘာမှမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်နံနက်သစ်သားရှိသည်ဟုမကြာခဏသတိပြုမိသော်လည်းအမြဲတမ်းမရ။
ဒီဟာကိုတစ်ယောက်မှတွေ့ဖူးလား။ ငါဆိုလိုတာကဘာမှမရှိဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ ဒီမကြာခင်လှည့်မလား?
၁၂ ရက်အကြာ - (PMO ၃၂ ရက်) ဂရိတ်သတင်း !!! Soo, ငါကဒီမိန်းကလေးနဲ့ချိန်းတွေ့ပြီးပြီ၊ မနေ့ညကငါတို့နမ်းတဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီမိန်းကလေးကအံ့သြစရာပဲ။ အဆိုပါခံစားချက်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနမ်းခြင်းနှင့်နူးညံ့သောနာရီများအတွင်းအချိန်အများစုကိုစိုက်ထူခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူကအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသည်။
ဒီနေ့မှာတော့ porn ဆိုတဲ့အတွေးဟာနှစ်သက်စရာကောင်းပြီးဝေးကွာလှတဲ့အတွေးတစ်ခုပါ။ ငါအနာဂတ်ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင် !!
နောက်နေ့ - တောင်ပိုကောင်းလာပြီ! ဟုတ်တယ်၊ အားလုံးပြီးပြီ ပြီးခဲ့သည့်ညကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ တကယ့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်အကြောင်းတောင်အိပ်မက်တောင်မက်ခဲ့တယ်။ အားလုံးထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာ porn ကိုရပ်တန့်ဖို့ကကျိန်းသေထိုက်တန်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်ကံကောင်းခြင်း၏အကောင်းဆုံး !!
နောက်တစ်နေ့လေးပို့စ်များကိုသူပေးထားသည့်တစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်ကြ၏။ အင်္ဂလိပ်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘာသာစကားမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိအပို့စ်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူ၏ non-linear သဘာဝကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။ သူဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာ, လေးပတ်အတွင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပိုရှည်ကြာပါသည်။
(Post ကို 1) ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးငါမူကားအပူတပြင်းမိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံအသေဖြစ်၏, ငါ့လိင်စိတ်3ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အသေဖြစ်၏။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း ငါဒါစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီပေါ့။
ငါ PMO ကိုရပ်တန့်ရှေ့မှာငါထက်ပိုဆိုးထင်ပါတယ်။ ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး ငါဟာအပူတပြင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၈ နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးကိုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုကြောက်တယ်။ ငါလိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့နည်းလမ်းများစွာနဲ့စီမံခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်နေတာကငါ့ရည်းစားကိုတကယ်ချစ်လို့သူမအဲ့လိုဆက်လုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့စွမ်းအားပဲ။
(Post ကို 2) OK ကို, ကောင်းစွာငါ PMO မပါဘဲတစ်နေ့လျှင် 24 အတွက်မိပါတယ်။
ဝိုး! တစ်ခုခုယနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ 1 တစ် 10 ခုနှစ်တွင်ရေတွက်ဘာကြောင့်လဲ, ငါသည်ငါ့လိင်စိတ်အတွက်5ခံစားရပေမယ့်, ဒီအံ့သြစရာဖြစ်သနည်း ငါလိင်စိတ်၏ 1 နှင့်အတူ0တစ်နှစ်ထက်ပိုခဲ့, ငါ 0.00000000000000000 ဆိုလိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ မနေ့ကငါဒါစိတ်ကျရောဂါဝမ်းနည်းနှင့်စိတ်ပျက်ခံစားခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒါကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီ libido မှာ ၅ ခုကကျွန်တော့်ကိုဆက်ပြီးရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အားပေးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ငါဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာမေ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လူအင်အားအနည်းဆုံးကပြန်လာနေသလိုပါပဲ။
(Post ကို 3) မင်္ဂလာပါ။ ငါ PMO မပါဘဲတစ်နေ့လျှင် 28 အတွက်မိပါတယ်။ ကောင်းပြီ4days ago ငါတကယ်ငါ၏အလိင်စိတ်အနည်းငယ်ခံစားခဲ့ရနဲ့ကျွန်မဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပေမယ့်အတိတ်ရက်ပေါင်း, ငါသည်နောက်တဖန် 0.0000 လိင်စိတ်မှာပေါ့။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်တဖန်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းငါကျော်ရရန်ရှိသည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်, ငါမှန်းဆဆက်လက်။
ငါလှလှပပလှပအဖိုးတန်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုမြင်လျှင်ကောင်းစွာငါဘာမျှမခံစားခဲ့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျ။ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်နိုးထစေတဲ့မီးပွားတစ်ခုကဒီနေ့ငါ့အတွက်အရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကကျွန်မရဲ့အတိအကျဖြစ်လို့ - ကြီးမားတဲ့ Boobs, ဂျပိန်လှပသောမျက်နှာ၊ အမည်းရောင်၊ အဖြူရောင်အသားအရေ၊ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး၊ နည်းနည်းတောင်မှသုညမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝဟာအနာဂတ်မှာပိုကောင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
(Post ကို 4) အကြှနျုပျ၏လိင်စိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်, PMO မပါဘဲ 29 ရက်, ငါ Viagra သို့မဟုတ် Cialis, ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲ, နောက်ဆုံးညဥ့်ကိုငါ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလိင် havd ။ ဒါဟာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့လိင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဒါကြောင့်သဘာဝအ, စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပဲစင်ကြယ်သောလိင်စိတ်နှင့်တစ်ဦးအထိခိုက်မခံလိင်တံခံစားရတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်တာကာလတွင် ED၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ Viagra၊ Cialis၊ libido သုညဝေဒနာများခံစားခဲ့ရပြီးငရဲတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ပြန်လာပြီ သဘာဝအလျောက်ငါအပျိုစင်ဘဝကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်
PMO မပါဘဲရုံ 29 ရက်။ ငါသည်ဤနည်းလမ်းကိုအာမခံပါသည်။
တစ်ဦးမျှမညစ်ညမ်းလေးပတ်ကြာအပြီး update ကိုမရှိ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏သုံးပတ်။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့သူတိုးတက်မှုကိုလုပ်ပေမယ့်နေဆဲ (မကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုရမ်ထံမှ) ကိုသွားမယ့်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ထားပါတယ်
ငါသည်ဤ site ကိုရှာတွေ့ကတည်းကငါ့အတိုးတက်မှုအပေါ်ကို update ချင်တယ်။ ပိုများသောငါအခြားသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်း, ငါ၏နိမ့်ဆုံးမှာအခါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုသင်တို့ကိုငါပြောပြနိုင်ထက်ပိုပြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ ထွက်ထိုပြည်၌သင်တို့သည်များစွာသောလိုပဲငါငါ့ကိုထဲကငရဲကြောက်လန်ရာနောက်တဖန်လိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်ဘယ်တော့မှမယ်ထင်ခဲ့တယ်။
ယနေ့တွင် P မရှိသဖြင့် ၄ ပတ်၊ M မပါသည့် ၁၉ ရက်နှင့် O. P မပါ ၀ င်သော နေ့မှစ၍ ၁ ရက်ဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝမှာတပ်မက်ခြင်းနှင့်မရှိဘဲသွား၏စိန်ခေါ်မှုကိုချစ်။ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးကတည်းကကျွန်မရဲ့စိုက်ထူမှုဟာထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီးဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လိုခံစားလာစေပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ကြီးမားလွန်းလို့နာကျင်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အကြှနျုပျ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအများကြီးပိုကောင်းနှင့်ရလဒ်အဖြစ်အလုပ်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ငါဟာအိပ်မပျော်ဘူး၊ ငါနဲ့မတူပေမဲ့ငါမငြီးဘူး၊ ဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်။
ငါလအနည်းငယ်ကြာအောင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအခြေအနေကိုသူ့အားရှင်းပြခဲ့သည်။ သူမတကယ်နားလည်သဘောပေါက်နေခဲ့သော်လည်းအခြားညတွင်သူမအပေါ်ကျွန်တော်ဆင်းနေခဲ့ရသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မကြာပေမယ့်ငါတလျှောက်လုံးခက်ခဲနေ၏။ ငါခက်ခဲစွာ (ဥပမာမိနစ် ၃၀ ခန့်) မကြာမီအချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသည်၊ မနှိုင်းယှဉ်လျှင်အတိတ်ကာလကယူခဲ့သည့်အချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမျှမဖြစ်ဟုမသေချာပါ။ အရင်တုန်းက IM to P ဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတကယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးအဆုံးသတ်သွားတာနဲ့အမျှအဲဒါကိုအမြဲတမ်းလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ကြိုးတပ်ဆင်တာငါထင်တာ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထပ်ခါတလဲလဲကြိုးဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်ငါ ထပ်မံ၍ ရုန်းကန်ပြီးနောက် ၄၅ မိနစ်ခန့်လောက်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တိုင်းအနေအထားကြိုးစားခဲ့ကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမ O ကိုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမကိုသူမမပျော်ခဲ့ပါ။ ငါ *** မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမသိမှီတိုင်အောင်လုံးဝပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျနော်တို့ရပ်တန့်တက်အဆုံးသတ်ပြီးတော့သူမကငါ့ကို ** ပေးပေမယ့်ဖြစ်စေမကျင့်လိမ့်မည်။
ငါ M သည်ငါ့ဂျွန်ဆင်၏ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသည်။ သို့သော် ၁၉ ရက်နှင့်မျှော်မှန်းခြင်းမရှိသော M သည်ကျွန်ုပ်၏ gf သည်ကျွန်ုပ်အားအင်အားအလွန်ပြင်းထန်စေသော်လည်း ** နှင့် hj မကူညီနိုင်သည့် hj ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြီးမားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားအမြဲတမ်းမုန်းတီးမှုများဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်မစတင်မှီကထက်များစွာပိုမိုသောအရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ယခင်ကကြုံခဲ့ရသည့်ပြproblemနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဟာချိုသာနေပါတယ်
ဒီစတင်ရန်ရှာဖွေနေမည်သူမဆိုဒီဖတ်ပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အော်ဂဲနစ်ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင့်နှလုံးယူပါ။ ကြှနျုပျတို့လညျး Reboot လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်နှင့်သမိုင်းငါတို့သည်တဖန်စတင်နိုင်ပါသည်ဒါသုတ်။ ကွန်ပျူတာများလိုပဲအမြဲသင်တို့ရှိသမျှသည်သာမန်ဘဝခံစားရပ်တန့်ရန်လုံလောက်ကျန်ရစ်သော်လည်းမတစ်ခုခုရှိရလိမ့်မည်။
အားလုံးနှင့်4ပိုပြီးရက်သတ္တပတ်မှာထပ်မွမ်းမံပါမည်မှကံကောင်းပါစေ။
မရအတော်လေးဟာ reboot လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်နောက်ထပ်ဥပမာ။ ဤသူသညျသူ၏ချစ်သူနှင့်အတူရံဖန်ရံခါ Non-orgasm လိင်နှင့်အတူစမ်းသပ်နေပါတယ်။
ငါကဒီမှာတပြင်လုံးကိုတှေ့အကွုံမြားအကြောင်းကိုအပြုသဘောတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ တောင်မှငါ့အတိုတောင်းအတန်ငယ် underacheived reboot ငါ၏အယခင်ပညာရေးပြဿနာအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်။
ငါသည်ဤစတင်ခဲ့ခြင်းမပြုမီက start မှာဒါမှမဟုတ်လိင်စဉ်အတွင်းတစ်ခုစိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နှင့်လိင်အများကြီးပျော်စရာလုပ်မပြုခဲ့ရသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွင်းအမှန်တကယ်စစ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမရှိသည့်နေ့ရက်များကြာလာသည်နှင့်အမျှစိုက်ထူမှုရရှိရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ သို့သော် ၁၀၀% အထိမရောက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးသတိပြုမိသည်မှာကျွန်ုပ်သာမဟုတ်ပါ။
ထို့နောက်ငါသွားမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောစစ်တိုက်ရှိခဲ့သည်ဒါအော်ဂဇင်အနီးကိုသွားဖို့မကြိုးစားခဲ့ပါသည်သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါနံနက်စိုက်ထူခဲ့နှင့်ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းအကြိမ်အရေအတွက်နှင့် 100% မှာစိုက်ထူနှင့်အတူအချို့သောကြီးမြတ်လိင်ခဲ့
ငါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအကြှနျုပျ၏ gf နှင့်အတူဤ dicussed သူခြားနားချက်ကိုမဖွင့်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဒါပေမယ့်လည်းသူကဖြစ်ပျက်ဖို့ကအတင်းရန်ရှိခြင်းကြောင့်ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ကပိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မေတ္တာတော်ကိုချမှတ်ခြင်းကိုပိုမိုဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်လျော့နည်းဖိအားပေးခံရဖြစ်ပါသည်, အလွန်သိသာကပြောပါတယ်။
အောက်ပါနှစ်ခုတုံ့ပြန်မှု porn သည်သူ၏ ED စေသောသံသယဖြစ်သော်လည်း, သာပြန်ဖွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် dabbled ခဲ့သူအခြားလူအားဖြစ်ကြသည်။
(1st တုံ့ပြန်မှု) ငါနှင့်အတူတူပါပဲအတိအကျအတူတူပါပဲအတွေးဖြစ်စဉ်ကို (ယိုစိမ့်) အတိအကျ။ အတိအကျ - အော်ဂဇင်ကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်တစ်ဝက်ခက်မည်။ Bro ကယိုစိမ့်မှုမဟုတ်ပါဘူး ဂယ်ရီ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံနေရသည်။ အားလုံးကိုရပ်လိုက် PMO အားလုံး။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၆၀ တွင် PMO မရှိသောအရာဖြစ်သည်။ Shit ကတိုးတက်နေပြီ။ မကြာခင်ကစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေကိုမကြာခဏကြုံခဲ့ရတယ်။ Libido ပြန်လာသည်။ အချိန်ယူရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်နယ်လမ်းကြောင်းမှာပြတ်တောက်သွားသည်။ Google Nocturnal စိုက်ထူခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများလည်းပြုလုပ်သည်။ တံဆိပ်ခေါင်းပါသောလူတစ် ဦး သည်သင်အိပ်နေစဉ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်မှုရှိမရှိသိရန် (နံနက်သစ်သားနှင့်သင်မနိုးသောဘီစီအားဖြင့်ညအချိန်တွင်စိုက်ထူခြင်းမခံရဟုဆိုလိုသည်) ဖြစ်သည်။ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ညစ်ညမ်းသောအဝတ်အစားများဝတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးများ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိန်းကလေးကိုရိုက်နှက်ရန်လိုအပ်ပါကပိုက်ကွန်တွင် 'ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ' အချို့ဖြည့်စွက်ချက်များရှိသည် (၎င်းတို့တွင် erectile မူးယစ်ဆေးသုံးမျိုး၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်သည်) ။ သင်ဆေးညွှန်းမရနိုင်ပါက၎င်းတို့ကိုမှာထားပါ၊ အကြိမ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်ယုံကြည်မှုလည်းတိုးလာလိမ့်မည်။ ဘီစီကသံသရာတစ်ခုပါ။
(2nd တုံ့ပြန်မှု) သင်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မည်သည့်အရာကမှားယွင်းနေသည်ကိုကျွန်ုပ်နီးပါးအာမခံနိုင်သည်။ ငါ့အမှု ၉ လအကြာကမင်းရဲ့ကိစ္စနဲ့တူတယ်။ ငါနှင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာတစ်ခုခုရှိခဲ့သည်အလေးအနက်စဉ်းစားမိတယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း၌နှိုးဆော်ခြင်းခံရနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်အကြိမ် PMO လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ) သို့သော်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုသို့ရောက်သောအခါ .... ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်ရောက်သည်နှင့်သို့မဟုတ်ရာထူးပြောင်းပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယောနိ၏ခံစားချက် (အထူးသဖြင့်ကွန်ဒုံးတွင်) ကိုမရိပ်မိနိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်လက်၏ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ထိုအခါငါစတင်စဉ်းစား ... ကောင်းကောင်းဒါကြောင့်ငါ့အဆေးလိပ်သောက်အိုးနှင့် cigs ၏နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ဟာ porn-related ED မှာအချို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ ၃၅ ရက်ကျော်သော NO PM (သို့) O မသွားခင်မှာငါဟာခိုင်မြဲတဲ့စိုက်ထူခြင်းကိုခံနိုင်ခဲ့တယ်။ စိုက်ထူရုံသာမကအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း၊ နံနက်သစ်သားစသည်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းအပြည့်အ ၀ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ စမ်းသပ်” တာတောင်မှငါဟာအမှားကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ငါ PMO ကိုစွဲလမ်းစေခဲ့တဲ့အော်ဂဇင်အပြီးမှာ chaser effect ရှိခဲ့တယ်။
ထို့အပြင်သင်သည်တစ်ခါတစ်ရံစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့။ ငါသည်လည်းထိုအရာရှိသော်လည်းသင် PMO မပါ ၀ င်ပါကရက်ပေါင်း ၃၀ ကြာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင် PMO မရရှိတော့ပါ။ နောက်ဆုံး၌အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိခြင်းဖြင့်သင်၏စိတ်သည်အလွန်များပြားလာလိမ့်မည်။ သင်ခက်ခဲလိမ့်မယ်သိတယ် အပြည့်အဝ reboot လူကိုလုပ်ပါ။ မင်းကမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ ၂ ပတ်ကြာတဲ့“ အနည်းငယ်” p“ အနည်းငယ်” ကိုတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရင်းမှာဒီနေရာမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအနည်းငယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လူထွက်သွားရပေမည်။ အနည်းဆုံး ၁-၂ လကိုရှောင်ပါ။ သင်၏အသက်အရွယ်၌သင်သည်ခဲယဉ်းသောစိုက်ထူမှုရရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အလောင်းအစားနိုင်သည်။ ကံအကောင်းဆုံး
တစ်စက္ကန့် reboot လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်:
ငါ ED နှင့်အတူမည်သည့်ကိစ္စများမလိုဘဲခဏအဘို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုငါအရှိဆုံးစွဲငါပြန် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့မူလအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပြုလေ၏ထက်နောက်ကျောဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနေဆဲမကြာသေးမီကသည်အထိတစ်ခုစိုက်ထူ acheive နိုင်ခဲ့သည်။
ယခုငါနောက်တဖန်ငါ၏အဦးနှောက် reboot ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာသင့်ဦးနှောက်မှ reboot လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အစစ်အမှန်ပြဿနာ porn ကနေဝေးနေနိုင်ကြဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ 50 နေ့ရက်ကာလအဘို့အခမဲ့ pmo ပါပြီ shortly- ။ သူကပြောပါတယ်ခံရ, ငါသည်ငါ့တိုးတက်မှုစမ်းသပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က edging စတင်ခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမ porn- အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ထိတွေ့ - နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူ / အပန်းဖြေ - အာရုံခံကိရိယာမုန့်။ Fleshlight သာ .. ပြီးတော့ရလဒ်တွေကအံ့သြစရာပါ။ ငါနှစ်များတွင်ခဲ့အကောင်းဆုံးစိုက်ထူ။
O တစ်ပတ်မှစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာ၊ reboot“ တကယ်အလုပ်လုပ်နေမလား” ဆိုတာကိုဒီနေ့ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါပြောနိုင်တာကတော့နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာလိင်ပညာကိုငါခံစားမိတာဟာအကောင်းဆုံးခံစားချက်ပဲ။ ငါ 14 နှစ်အရွယ်ကဲ့သို့အထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ မည်သည့်နှိုးဆွမှုမရှိဘဲကျောက်ဆောင်တွင်နေနိုင်မည်။ ဇယား၏ E အရည်အသွေး။ ပြီးတော့အိုမြို့နဲ့နီးလာရင်ငါသွားရှာတယ်။
ငါအစဉ်အမြဲငါတစ်ခုတည်းအကောင်းဆုံးအော်ဂဇင်။ အော်ဂဇင်များစွာကို (တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး) ။
ယခုတွင်ငါ“ ပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်” ကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသောအမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းများများပြားလာပြီး၎င်းသည် ဦး စားပေးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ သို့သော်ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေ / ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်လာမယ့်ရက် ၅၀ လောက်မှာ M ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကို O တစ်ခုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူမှတ်လို့မရဘူး။ ပြီးတော့လိင်မှုကိစ္စကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း / အပျော်အပါးကိုလိင်ကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်ရှေ့ဆက်သွားရမယ့်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်း ။
ဒီတော့ဟုတ်တယ်…ငါ O'd မလုပ်သင့်ဘူး။ ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ စွဲချက်” ကိုခံစားနေရသည်။ ငါဒီဟာကိုအသုံးချပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သက်တောင့်သက်သာနေသမျှကာလပတ်လုံးငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ရောက်နေပြီဟုအမှန်ပင်ထင်မှတ်သည်။
ညစ်ညမ်းခြင်း၊ သေခြင်းချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏စာရင်းကိုပြန်လည်မသတ်မှတ်ပါဖြစ်စေ ... ဤ“ ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်း” တစ်ခုခုကြောင့်ငါ့ကိုအပြည့်အဝစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူလာမည်ကိုသေချာစေသည်။
Reddit NoFap မှ: (သူနေဆဲသုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်)
ပညာရေးကနေပြန်လည်နာလန်ထူမရှိ FAP တစ်ရည်းစားနှင့်အသစ်စွမ်းအင်ကျေးဇူးတင်စကားကိုတွေ့
ဒါကြောင့်ကိုယ့်နေ့ရက်ကို 48 အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ကောင်လေးပါကောင်လေးငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ငါ့ကိုချဈအဘယ်သူမျှမ FAP ရှေ့မှာဘယ်လိုသင် run ကိုပေးကွပါစို့။ ငါဥပဒေနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလေ့လာနေသူတစ်ဦးခက်အလုပ်လုပ်ကျောင်းသားဖြစ်၏။ ငါများစွာသောအဆွေခင်ပွန်းနှင့်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်သူအများအပြားမိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ပါတယ်, သို့သော်ကိုယ့်ငှာကွိမျအတူဘယ်နေရာမှာမဆိုရဖို့သလိုပဲဘယ်တော့မှမ။ ကိုယ့်အငယ်စဉ်အခါက, ဒါ 16 သို့မဟုတ်ဆိုသညျကား, ငါတတျနိုငျသကဲ့သို့အများအပြားငှာကွိမျတက်ကောက်ဖို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ငါကမှာအတော်လေးကောင်းသောဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အတိတ်ဒုတိယအခြေစိုက်စခန်းသို့ သွား. ဘူး။ ကိုယ့်အဟောင်းများကိုရတဲ့စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သော PMO သံသရာသို့ရတဲ့ သွား. , မိန်းကလေးများရှာပြီးသူတို့ကိုတက်ကောက်ဖို့ငါ့အ drive ကိုနီးပါးတော့ဘူး။ ကိုယ့်ငှာကွိမျကောက်ဘယ်လိုအချို့မှစီမံခန့်ခွဲလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အခါ, ကိုယ့်ငါ့ကိုနှင့်သူမ၏အဘို့အရှက်စရာဖြစ်သည့်ပညာရေးကိစ္စများရှိခဲ့ပါတယ်။
fap မရှိတဲ့နေ့ ၄၈ ကိုမြန်မြန်ရှေ့ဆက်ကြပါစို့။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ ရက်အတွင်းမှာပဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် ED သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ငါပျောက်ကွယ်ပြီဟုဆိုလိုသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် ၃ နာရီခန့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးထိုအရာအားလုံးအတွက်ခက်ခဲသည်။ (အချို့အကြောင်းပြချက်များအရကျွန်ုပ်သည် cum မလုပ်ရသေးပါကအခြားသူ၌တူညီသောပြissueနာရှိပါသလား) ။ ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုပိုမိုရှိခြင်း၊ အသားအရေပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုစွဲဆောင်မှုရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ထပ်တူထပ်မျှခံစားရသည်။
ယင်း၏ 48 ရက်, ယောက်ျားတွေအပေါ် Come (ငါ့အဘို့, ကြာကြာအခြားသူတွေများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်) ကိုဖွင့် fuck ဆိုတဲ့နှင့်လုပ်ယောက်ျားသည်ကငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။
အားလုံး To: ဧပြီ 02, 2013,
ငါနေ့က ၇၆ ရက်မှာညစ်ညမ်းမှထွက်တာ ကိုးရက်မှ 76 ရက်ကွာ။ နှစ်ရက်အကြာငါနံနက်သစ်သားဖြင့်နှိုးထ, ငါနှစ်များတွင်ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်!
20 နေ့ရက်များ… ED ဝေးသွားခြင်း၊ ဘဝတိုးတက်ခြင်း။
28yo အမျိုးသား။ 10 days ago သည်အထိအတိအကျနှင့် ပတ်သက်. 20 နှစ်ပေါင်း + များအတွက် PMO ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရ ED နှင့်ဘယ်တော့မှကြောင့် PMO ခဲ့သည်ထင်။ နှစ်ဦးစလုံးကြိမ်ငါ NoFap နှင့် YBOP အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုတင်အပေါ်လမျးစမှီခိုသောအဘို့မရှိ, ED ဆေးလိုအပ်နေ, အတိတ်သီတင်းပတ်အတွင်း VI ကို4ကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ တောင်မှဒီအစောပိုင်းအဆင့်မှာလိင်ကအစဉ်အဆက် ED meds အတူပြုတော်မူပြီထက်ပိုကောင်းခဲ့ပြီ။ ငါကပိုအလုပ်အမှုကိုပြုလာပြီဖြစ်၏။ ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရသည်။ တန်ဖိုးရှိရှိ, အကျိုးရှိသောအမှုတို့ကိုပြုဖို့ပိုအချိန်။ သငျသညျ YBOP နှင့် NoFap အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
(၃၂ နှစ်) - ၂၇ ရက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုတွေ့မြင်နေရသည်
ဤဆိုဒ်တွင်အလွန်များပြားသောအကြောင်းအရာများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်မှာအကြံဥာဏ်အချို့နှင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအကျိုးကျေးဇူးများ (၂၇ ရက်ကြာ porn မပါသော)
(၁) ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောနေ့ဖြစ်စေ၊ စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်စေဖြစ်စေ၊ ငါ့ရဲ့ဟော်မုန်းများ / လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုကျွန်ုပ်အားပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးရုံပဲဖြစ်စေ၊ ငါဟာ porn ကိုပြန်ကြည့်နေမိ အမြဲတမ်းနားမလည်နိုင်ဘူး yourbrainonporn.com တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်သောအကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယခုအထိကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အထောက်အကူဆုံးသောအကြံပေးချက်မှာသင်၏လိင်မှုကိစ္စအားခေတ္တရပ်နားခြင်းဟုမှတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါ porn ကို option တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်မဟုတ်။
ငါကလုံးဝလျစ်လျူရှုပြီးညစ်ညမ်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှောင်ရှားဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်။ ငါ porn အကြောင်းကိုအမြဲမေ့လျော့ရမည်ဟုလက်ခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဆိုဒ်များတွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် / အပူဆုံးမိန်းကလေးအသစ်ကိုမရှာဖွေတော့ပါ။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ porn ကငါ့ကိုအလုံအလောက်နာကျင်စေသည် ညစ်ညမ်းသွေးဆောင်မှုက ED သည်ကျွန်ုပ်အားစွဲလမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်စေသည့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သော်လည်းအချိန်ကုန်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ဆက်ဆံရေးများစသည်တို့သည်အရေးကြီးသည်။
(၂) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၃၀ မှခြောက်နာရီအထိနာရီအပိုသုံးဆယ်ပေးသည်။ ဝန်ခံရမည်အချို့နေ့များသည်ကျွန်ုပ်သည်အပိုအချိန် (တီဗီကြည့်ရုံ) နှင့်များစွာမလုံလောက်ပါ၊ သို့သော်အခြားနေ့များက၎င်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူထွက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးသည်ယခင်ကပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အတူရှိနေသောအခါ porn ကိုစဉ်းစားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသို့အိမ်ပြန်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းဘီလ်ပေးဆောင်ရမည့်အကောင့်များအားလုံးသေချာစေရန်ကဲ့သို့သောလိုအပ်သောအိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းများသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ငန်းများကိုတောင်ကျွန်ုပ်ပြီးပါပြီ။ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုထားသည်။
(၃) ယခုအချိန်အထိအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်။ အကြှနျုပျ၏ porn သွေးဆောင် ED ပျောက်ကွယ်သွားဖို့စတင်! ED ကကျွန်မကိုအရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့ပါတယ်။ ငါတန်ဖိုးမရှိဟုခံစားရရန်စတင်ခဲ့သည်။
ဤအနာရောဂါပျောက်ကင်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်အတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်သည်ဤခက်ခဲသောအချိန်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်ရလာဒ်များနှင့်ရလဒ်များကို“ စမ်းသပ်” ရန်အတွက်ရည်းစားတစ် ဦး ရှိသည်။ ပထမဆုံး ၁၄ ရက်ကြာတဲ့ porn မပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ကျွန်မရဲ့ porn induced ED ကိုရပ်တန့်ဖို့ကူညီတာကြောင့်ကျွန်တော်အများကြီးမမြင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်အရာရာသည် ၂၁ ရက် (၃ ပတ်) ခန့်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်နေရာနှင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသည့်နေ့များမတိုင်မီအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ပြီးကျန်းမာနေသည့်အချိန်တွင်ကဲ့သို့ငါ့စိုက်ထူမှုသည်ငါ့ထံသို့လာနေသည်ဟုခံစားနိုင်သည်။ ကျွန်မတို့ဟာကြီးကျယ်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ရပြီးကျွန်မတစ်လျှောက်လုံးမှာခိုင်မာတဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့သည်နောက်ညဥ့်ကိုထပ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးငါ့စိုက်ထူတစ်လျှောက်လုံးခိုင်မာခဲ့ပါတယ်။
(4) ယခုတွင်ငါသည်အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများ (အသက်ရှူ!) ကဖွင့်ရ reboot နှင့်ဖွင့်လာနေပါတယ်။ ငါရည်းစားနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာသူမကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အဝတ်တွေကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလေးစားမိတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးကအရမ်းဆင်းရဲပြီးစိတ်ရှုပ်စရာပါပဲ။ ငါသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲနေပြီး၊ တစ်ညမှာငါ့ရည်းစားဟောင်းကကျွန်တော့်ဘေးမှာအိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းနေပြီးလှည့်စားချင်နေတာမှတ်မိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီနေ့မှာငါနာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းတဲ့နာရီကိုကြည့်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့လို့သူမကိုလျစ်လျူရှုခဲ့တယ်။ ငါလုံးဝလိင် drive ကိုခဲ့ရသည်။ သူမသည်အလွန်ငြင်းပယ်ခံရခံစားရတယ်။ သူမ၏ခံစားချက်များကိုယခုကျွန်ုပ်နားလည်နိုင်ပါပြီ
ငါထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုရေးပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်အခုငါကောင်းကောင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်တာကမင်းလည်းအဲဒါကိုလုပ်နိုင်တယ် ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏ဘဝကိုအလွန်အမင်းပျက်စီးစေသောကြောင့်၎င်းအားစွန့်ပစ်ရမည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရုန်းကန်နေရပြီးကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်ရောက်ချင်သည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံတွင်အားနည်းချက်များရှိတတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လမ်းဟောင်းသို့ ပြန်၍ မသွားနိုင်ကြောင်းအားထုတ်သည်။ ငါပုံမှန်, အစိုင်အခဲစိုက်ထူခြင်းနှင့်တစ်နေ့နေ့မှာငါ့ရည်းစားသို့မဟုတ်မိန်းမနှင့်ပင်ကြီးသောလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ကျန်းမာသောသူဖြစ်ချင်တယ်။
PS- နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ ရက်ကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသောအရာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ“ အနိုင်ရ” ဖြစ်သည်ဟူသောအတွေးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါ့မှာမကောင်းတဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်လုံးလုံးအကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ရှိရင်တောင်ငါ့ကိုစိတ်ပျက်အောင်မလုပ်မိဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ငါကောင်းပြီ၊ နေ့ကအနိုင်ရတယ်၊ ငါက porn ကိုမကြည့်ဘူး။ ငါ porn မပါဘဲနေ့တိုင်းသွားတော့၊ ငါ reboot ပိုကောင်းလေ၊ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကောင်းကောင်းပြန်ကောင်းလာမယ် (ပုံမှန်၊ အစိုင်အခဲစိုက်ထုတ်မှုများ) ။
ငါအရမ်းရုန်းကန်နေရတယ်၊ porn ဟာငါ့ဘဝရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် (နောင်တရမိတယ်)၊ ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါအများကြီးပိုကောင်းလာပြီ၊ ငါကငါ့ရဲ့လိင်ဘဝကဖြစ်သင့်တဲ့နေရာကိုပြန်စမယ်။ နေ့တိုင်းအနိုင်ရရှိသည်။ တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်အားကောင်းနေပါ။ မင်းကံကောင်းပါစေ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ 90 reboot ပြီးစီးပါပြီ ငါပုံမှန်စိုက်ထူရှိသည်နှင့်ငါ့အသက်ကိုပြန်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိန်းမနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူမအားပုံမှန်ကျေနပ်နှစ်သက်စေခဲ့သည်။ ငါသာသူ့ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူမ၏ကောင်းစွာဆက်ဆံပါ။ PMO မရှိတော့ပါ
ငါနောက်ပိုင်းမှာပိုပြီးရေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရုံ reboot မယ့်သူထွက်ရှိမည်သူမဆိုဖို့မျှော်လင့်ချက်ပေးချင်တယ်။ ငါကအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ကြိုးစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ပြီးသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကို ဆက်၍ လုပ်ရန်အချက်ကားအဘယ်နည်း။
ငါအစဉ်အဆက်ကိုထပ် porn ကိုကြည့်ချင်ဘူး။
ငါ PMO သံသရာ၏အာရုံကြောထိခိုက်သက်ရောက်မှုများနားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ED ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုယုံကြည်မှု၊
သို့သော်မည်သူမဆိုငါ့ကိုနေ့က 150 ပြီးနောက် masturbating မဟုတ်ဆက်လက်ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ပြောပြနိုင်မလား?
adamharro - Aprပြီ 27, 2013
နေ့ 145 မျှ Porn / နေ့ 48 မျှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / နေ့ 41 မျှ orgasm
- အကယ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖော်ပြပါက ၅၀ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်နိုင်သောလိင်စိတ် / လိင်ဆိုင်ရာအစစ်အမှန်များမရှိသေးပါ။
- နေဆဲမျှနံနက်သစ်သား။ ပြီးခဲ့သည့် 145 ရက်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
- လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီငါ 80-90% ပျောက်ကင်းအောင်ပြောနိုင်ပါတယ်
၁ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာထိုးခြင်းဖြင့် ၁၀၀% ခဲယဉ်းနိုင်သည်
- ပါးစပ်မှ ၉၀% ခက်ခဲသည်၊ လိင်အတွက်လုံလောက်သော်လည်းကောင်းသည်မဟုတ်
- တစ်နေ့တာအတွင်းစိုက်ထူမှုမရသေးသော်လည်း၊ တစ်ပြိုင်နက် 3-5 reboot ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပြဿနာနေဆဲဈဈတစ်ခုစိုက်ထူရထိန်းသိမ်းနည်းဆွလိုအပ်ရုံစသည်တို့, နမ်းထိ, ကြိတ်ရာမှစိုက်ထူမရကြဘူးဖြစ်ပါတယ်ပါဘဲ။ reboot ခင်မှာကိုယ်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်းတစ်တိုးတက်မှုဒီတော့မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုအချိန်ကာလအတွင်း flaccid ခဲ့ပေမယ့်နေဆဲငါ့ကိုမိန်းကလေးများအပေါ်နှိပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးကိုစတင်ရန်ကြိုးစားနေစတင်ရန်ယုံကြည်မှုမပေးပါဘူး။
ကျွန်တော့်သဘောထားကပိုကောင်းတယ်၊ ပြင်သစ်စာစသင်တာနဲ့အလုပ်မှာပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်တာကိုတွေ့ပြီ ငါယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောခံစားရတယ်ငါတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနားအတွက်ဝိုင်းကြဘူးနှင့်ငါနာရီပေါင်းများစွာအိပ်မက်မက်ပါဘူး။ အိပ်ချိန်ကနေနိုးလာရင် ၅-၁၀ မိနစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၉၀ မှ ၁၀၀% အထိစိုက်ထူစေတယ်။ (porn fantasy မဟုတ်) ကိုယ့်ကိုငါခုတ်လှဲသင့်မပြုသင့်မသေချာဘူး။
ငါသည်လည်းအားကစားရုံ၌ငါ၏အစွမ်းသတ္တိကိုကုန်းဖဲ့နောက်ဆုံးတော့ 220lb ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်းလွန်လေနှင့်ယခု 265lb လုပ်နေတာငါတစ်နှစ် 2lb မှာရှိမှီဝဲခဲ့သည့်ကိုယ်နှင့်အတူအလွန်ဝမ်းသာတယ်, 220 ကိုယ်စားလှယ်များ x ။
သို့တိုင်ကအရမ်းပင်ပန်းခြင်းနှင့် lethargic ရများသောအားဖြင့်နေ့လည် 20-4pm ပတ်လည်5မိနစ်မောအိပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ရုံကအရမ်းညှစ်တာမဟုတ်စွမ်းအင်ခံစားရတယ်။ ကြှနျတေျာ့လိင်အသက်အဘို့အပြန်နှင့်စွမ်းအင်မောင်းရဖို့ကိုချစ်ပါ့, ငါ့ဦးနှောက်နှင့်စိတ်ကိုစိုက်ထူစသည်တို့ကို, sexy ဖြစ်ကြပြီးကိုယ့်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေပေမယ့်ကိုယ့်အစာအိမ်အတွက်ခံစားချက်တွေကို, နှလုံးပြိုင်ပွဲကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောမိန်းကလေးများသိတယ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတိုတောင်းတဲ့ update တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အသက် ၁၅-၁၆ နှစ်အရွယ်မှာအင်တာနက် porn ကိုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခု ၂၃ နှစ်ရှိနေပါပြီ။
ဘဝက porn ဖြစ်စေလမ်းမပါဘဲ သာ. ကောင်း၏။
60 ရက်ပေါင်းနှင့် Mini-အစီရင်ခံစာရေတွက်။
ကောင်းသောညနပေိုငျးလူတိုင်းအတွက် ခရီး၏အ2/3တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌နေသောသူတို့အဘို့တစ် mini ကိုအစီရင်ခံစာ။ 45 ရက်ပေါင်းနှင့် 60 အကြားခြားနားချက်များမဟုတ်ဘဲအနိမ့်ခဲ့ကြပါပြီဒါပေမယ့်ငါကောင်းသောသတင်းရှိသည်။ လက်ျာဘက်ဆင်းကရပေးနိုင်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ sensitivity ကိုပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ gf ငါ့ကိုအရှိဆုံးကာမဂုဏ် handjobs ပေးပြီးယခုတွင်ငါသည်အမှန်တကယ်ကောင်းသောလေဖြတ်တွေအများကြီး (အနညျးဆုံးအကြှနျုပျအဘို့) အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်တန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်
စိုက်ထူ။ ငါ့ဘဝမှာ rockhard စိုက်ထူမှုအနည်းငယ်ပဲရှိခဲ့တယ်။ ငါဒီစိန်ခေါ်မှုကိုစတင်တဲ့အခါငါစိုက်ထူမှာစိုစွတ်သောသုတ်ပဝါဆွဲထားနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်မကြာသေးမီကအနည်းငယ်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ကြိမ်နှုန်းတိုးပွားလာပုံရသည်။
Orgasms ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ထို့အပြင်သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်လွှတ်ပေးရန်ထူးခြားသောဖြစ်ပါတယ်။ ငါလိုပဲငါဟာအားအင်ပြည့်ဝပြီးကောင်းသောခံစားမှုလိုပဲ၊ ဒီဟာနာရီအနည်းငယ်လိုကြာပါလိမ့်မယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါသို့မဟုတ်ယခင်ကျွန်ုပ်၏ GF ဖြင့်ပင်လျှင်ငါအော်ဂဇင်နှင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှလောက်ပျော်မည်ဟုခံစားမိပြီးနောက်ပြန်လမ်းစသို့ပြန်နိုးလာသည်။ PMO အော်ဂဇင်ပေးငွေနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝှေးစေ့။ သူတို့ကအများကြီးပိုပြည့်နေပြီးကျွန်မရဲ့လိင်တံဆီသွေးစီးဆင်းမှုကအများကြီးပိုကောင်းတယ်။ ဒါကိုအစောပိုင်းရေးသားချက်များမှာငါပြောခဲ့ပြီးလူတွေကငါဘယ်လိုလေ့လာတယ်ဆိုတာငါ့ကိုမေးတယ် အတော်လေးရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏လိင်တံကဖြစ်သင့်ပုံကိုဘယ်လိုတူပုံရသည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က PMO ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အဖြူရောင်ဖျော့ဖျော့ရှိပြီးရာဘာစေးကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အခုတော့ပိုလေးလာတယ်၊ ပိုနီနေတယ် (အရောင်ပြန်လာပြီ) ။ အထွေထွေကျန်းမာရေး အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်စိတ်ယေဘုယျချွေးလျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးလျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးငါ့အရေ (ငါဆဲထူးဆန်း whitehead get အားလုံးသော်လည်း) ဖွင့်ရှင်းလင်းထားပါတယ်, ငါ၏ဆံပင်ထူခြင်းနှင့်မိုက်တဲ့ bit နဲ့ငါနီးပါးနေ့စဉ်ကောင်းသောခံစားရလျက်ရှိသည်။ အကြှနျုပျ၏ယုံကြည်မှုပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မကောင်းသောခံစားရတယ်။
အဆင်မပြေတာ မင်္ဂလာပါ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သော moodswings ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတာအတိအကျမသိပေမယ့်ကျွန်မအရမ်း ၀ မ်းနည်းမိတယ်၊ စိတ်ဓာတ်မကျပေမယ့်ဝမ်းနည်းတဲ့နေ့တွေရှိတယ်။ ငါဒီခရီးကိုစကတည်းကငါပြုသမျှဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေအားလုံးကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
မူးဝြေခင်း။ လူကြီးလူကောင်း, ဒီ nofap မှ attribute တစ်ခုခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီ subreddit အပေါ်တချို့ကဒီမှတ်ချက်ချကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ငါခဏကအတော်လေးဆိုးရွားခဲ့နှင့်ဤငါ၏အ flatline ခေတ်ကာလအတွင်းအထူးသဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နိဂုံး TL; ငါ၏အယေဘုယျကျန်းမာရေးရှိပါတယ်အဖြစ်ဒေါက်တာကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတိုးတက်ခဲ့သည်။
ငါ porn သွေးဆောင် ed ခဲ့ရပြီးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ cum ငါ 15 ခဲ့ဘယ်တော့မှမနိုင်လျှင်ပင် (ကျနော်ပြန်ပြီးတော့ porn အများကြီးစောင့်ကြည့်)
ထို့နောက်ငါသုံးလတပြင်လုံးကိုအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းခြင်းမရှိအော်ဂဇင်အရာ (ငါလိင်ဆက်ဆံနေဖြင့်တစ်ချိန်ကလိမ်လည်လှည့) နှင့်ကျွန်မတစ်ဦးအလားဖြစ်လာတာပေါ့နှင့်တစ်ဦးခွံမာသီး busted banged လာမည့်မိန်းကလေးခဲ့။
TED ဟောပြောချက်ကြောင့် NoFap ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါအရင်ကတစ်ခါမှမစဉ်းစားဖူးတဲ့သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါစွဲနေပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုကမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်သလဲ။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ငါစဉ်းစားလိုက်ပြီး ED ပြproblemsနာအသေးအမွှားအမြဲတမ်းကြုံခဲ့ရတယ်။ ငါထနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်လုပ်သော်ငြားပြီးဆုံးရန်အချိန်များစွာကြာသည် (သူမအတွက်အဆင်ပြေသော်လည်းငါ့အတွက်စို့) ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာမပြီးဆုံးသေးပါ (အပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးသောအခါ၌ကျွန်ုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ )
ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်ကန်သောမိန်းကလေးရှာမတွေ့ဟုအမြဲအပြစ်တင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စကိုအများဆုံးကြည့်လေ့ရှိသည်ဟုအစဉ်အမြဲထင်ခဲ့မိသည်။ တစ်ချိန်ကလိင်မှတစ်ဆင့်တစ်ဝက်၊ ကျွန်ုပ်သည်လိမ်ညာခဲ့သည် ရေချိုးခန်းသို့သွားရန်အစားကျွန်ုပ်သည်အခြားအခန်းသို့ သွား၍ ကျွန်ုပ် LOL ၏ဆိုလိုရင်းကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုဆွဲ တင်၍ ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် NoFap ကို ၀ င်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ porn အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အခုတော့ငါဟာဘယ်တော့မှတစ်ပတ်အကြိမ်အကြိမ်အနည်းငယ်ထက်မကခဲ့ပေမယ့်ငါဘ ၀ မှာအစောပိုင်းကစခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်
ဒါကြောင့်ငါကောလိပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါလုပ်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ထိုအခါငါအဖြစ်ကောင်းစွာ P90X စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်; ဒီလိုလုပ်ဖို့ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ပန်းတိုင်ထားပါ၊ NoFapping ခေါ် testosterone ဟော်မုန်းပေါက်ကွဲမှု။ ဒါဟာလှုံ့ဆျောမှုမှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ငါပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ်အဘို့အဘယ်သူမျှမပြproblemsနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်နေ့ ၄ ထိ…နေ့ ၄ မှာအလွန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုများရှာဖွေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အရှုံးပေးခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန် NoFap မှရေးသားချက်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပြောခြင်းနှင့်နီးကပ်သည်။ နွေရာသီစတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုးဆုံးအပိုင်းမှာ BORDOM ဖြစ်သည်။
ယခုငါဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ၊ surfing reddit ထိုင်နေသည်။ အရသာတစ်ခုရရန်သို့မဟုတ် incognito tab ဖွင့်ရန်စဉ်းစားရန်အတွက်ရှေ့စာမျက်နှာတွင် NSFW ပို့စ်တင်ရန်တောင်းပန်ခြင်း မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့လုံးဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ၄ ရက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဟာကခက်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်အခုငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ စိန်ခေါ်မှု၏မာကျောမှုသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
အခုငါ့ခေါင်းစဉ်များအတွက်ဆင်ခြင်ဘို့။ ကျွန်ုပ်သည်ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်သာရှိသေးသော်လည်း NoFap စတင်ကတည်းကပထမဆုံးအကြိမ်မနေ့ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွင်အကောင်းဆုံးသောလိင်မှုဆုဖြစ်သည်။ ငါဟာကစားကွင်းမှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ထက်ပိုမြန်ပြီး trigonometry ထက်ပိုပြီးခက်ခဲခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်သူမသည်ငါမလုပ်မီသွားသည်။ ဒါပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ GO ကိုငါထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ သူမအမြင့်ကိုရောက်နေသလိုပါပဲ။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည်အခြားထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသတိမပြုမိပါ။ သို့သော် ၁၂ ရက်သာရှိသေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်အရာ၌တိုးတက်မှုများကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေများကိုကြာမြင့်စွာစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။
NoFap - အလုပ်လုပ်တယ် !! (ED သည်သုံးပတ်အကြာတွင်ကုန်သွားသည်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်)
by lekoizebs23 ရက်ပတ်လုံး
စကားစပ်အဘို့ငါ (ဍ, 25) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က NoFap အကြိမ်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့တစ်ကြိမ် 18 ရက်တယ်ငါမူကား kinda ရှုထောင့်ကိုဆုံးရှုံးနှင့်ပထမနေရာ၌ဤလုပ်ဖို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းမေ့သောကွောငျ့ထို့နောက်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖြတ်။ အစဉ်မပြတ်ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါယခုတကယ်တော့အဘို့ကိုသိတော်မူသောညစ်ညမ်းစွဲနှင့် pmo နှင့်အတူအချို့သောပြဿနာများရှိခြင်းစဉ်းစား, ငါ့ ED ဒုက္ခ၏အကြောင်းရင်းခဲ့ကြသည်
ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်ဤမိန်းကလေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတစ်ညအလိုတွင်သူမ၏နေအိမ်သို့အိမ်ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုငါနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာတွေ့ခဲ့ရသော်လည်းသူမသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တကယ်ဆက်ဆံပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ငါသို့သော် ED ၏ပြproblemနာအဟောင်းကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ငါ ED ရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ၏တစ် ဦး တည်းအတွေးကတကယ်ကဖြစ်ပျက်စေခဲ့သည်။ ငါကြိုးစားရုန်းကန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ nofap ထပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်၊ ဒါဟာအစမှာတကယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုတိုးလာတာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာတာနဲ့ငါ့ကိုဆက်သွားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့စွမ်းအင်တွေတိုးလာတာကိုငါသတိပြုမိလာတယ်။
သုံးပတ်အကြာ (ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ) တွင်အလားတူမြင်ကွင်း။ ပါတီပွဲပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်သူမအိမ်သို့ပြန်သွားကြသော်လည်းယခုတကြိမ်မှာမူကွဲပြားခြားနားသည်။ တကယ်တော့ငါဟာဒီဘုရားနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့နတ်သမီးလိုကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတယ်။ သုံးပတ်ကြာသော nofap သည်ကျွန်ုပ်ကိုတပ်မက်သောစိတ်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောလူတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ED ကိုအတွေးအခေါ်တစ်ခုတည်းကအစဉ်အမြဲရယ်စရာကောင်းသောအတွေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤချိုသာသော (နှင့်ခက်ခဲသော) အရာများဖြစ်လျှင် ED ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ! ငါတကယ်အဆင်ပြေခံစားရနှင့် foreplay ၏အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမိနစ်ပျော်မွေ့။ နောက်တစ်ခုသိတာကငါတို့ဟာလိင်ဆက်ဆံတာပါ။ ၁၀ စက္ကန့်လောက်မှာ၊ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်၊ အဲ့ဒီဟာကတကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ငါရယ်ပြီး“ wow၊ ဒါကစံချိန်တင်ရမလား?” လိုတစ်ခုခုပြောလိုက်တယ်။ သူမအရမ်းအံ့သြသွားပြီးရူးသွပ်တာ၊ 😉
ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပုံသဏ္andာန်နှင့်ပြည့်နေခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးများသည်လွန်ခဲ့သော (၃) ပတ်လုံးလုံးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောရယ်စရာကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များနှင့်မပြည့်စုံသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကြွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေပွီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့်ယုံကွည်မှုကိုပေးသည်။ အစစ်အမှန်လူ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကလူတိုင်းကိုဒီဟာကိုတကယ့်ရိုက်ချက်တစ်ခုပေးဖို့ငါ့ရဲ့နည်းလမ်းပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကငါ့ကိုဘယ်တော့မျှပြန်လှည့်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ငါနင့်ကိုညစ်နွမ်းစေတဲ့အောက်ခံလိမ်ပုံကိုတွေ့ပြီ။
ယခုငါ nofap ၏ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးခြားနားမှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် porn သို့မဟုတ်မိန်းမများနှင့်ရုန်းကန်နေရလျှင် NoFap သည်တွင်းထဲမှထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဘာကိုဆုံးရှုံးရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမုန်းခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောသနားစရာတန်ဘိုးအနည်းငယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်: သင်ထွက်ရှိရန်နှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုနှင့် hornyness ။ ဒါကတကယ်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်သူအချို့ကိုမှုတ်သွင်းထားတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး
ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ, ကျေးဇူးတင်စကား Nofap
ကျွန်ုပ်၏ Nofap ၏အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေချင်ပါတယ် အများအားဖြင့်အခြားသူရဲ့အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကကျွန်တော့်ကို nofap ဆက်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါအနည်းဆုံး2တစ်ရက် fapped မီ။
ငါ၏အတန်ပြန်သာ5ရက်ပေါင်းပြောပါတယ်ပေမယ့်, ငါ 1 /2ရက်သတ္တပတ် မှစ. , 30 ရက်ပေါင်းန်းကျင်များစွာသောအခြားအလင်းတန်းများဖြာ, ရှိခဲ့ပါတယ်, ပင် 60 ရက်။ စုစုပေါင်း၌ငါလှည့်ပတ်9လကြာ Nofap အပေါ်ပါပြီ။ ထိုသို့အလွန်ကြီးစွာသောအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။
မိန်းကလေးများနှင့်အတူရင်းနှီးရဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအတိတ်တွင်ငါ ED ၏အချို့ကိစ္စခဲ့ဘယ်မှာ။ အခုအချိန်မှာငါပြီးပြည့်စုံဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသည်။ တစ်ဦး houseparty ပေးခြင်းပြီးနောက်ကျွန်မ beautifull မိန်းကလေးနဲ့ငါ့အခန်းထဲထံသို့သွားလေ၏။
သူမသည်ငါ့ကိုလက်ကို ပေး. နဲ့ကျွန်မချက်ချင်းနီးပါးရောက်လာတယ်။ အဆိုပါနံနက်ပဲသူမ၏နှင့်အတူနမ်း / kuddling သညျ လာ. အပြီး။ မကအရမ်းဂုဏ်ယူသော်လည်း, သင်သည်တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ကြသည်ရှိမရှိစိုးရိမ်ပူပန်ထက်လမ်းပိုကောင်းဖြစ်ဖို့တစ်ခုခု။ ဒါဟာသူမ၏ချစ်ရသူခံစားရလုပ်! ယခုမူကားခံနိုင်ရည်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါဟာclichéအမျိုးအစားပါ။ ဒါပေမယ့် nofap ကကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုပေးခဲ့တယ်။ ငါအမြဲတမ်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်ပြောင်းလေ့ရှိသည့်နေရာ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၌မကောင်းသောခံစားမှုရှိခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ပျင်းစရာကောင်းလျှင်၊ ယခုငါဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ါသနာအသစ်များရှာဖွေခြင်း၊
ကျေးဇူးတင်ပါသည် Nofap, လှုံ့ဆော်မှု၏ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအရာအရပျဖြစ်ခြင်းသည်။
ဒါကငါမျှော်လင့်တယ်အတိအကျယျ !! ငါတောင်မှမကြာခဏ cumming ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ porn-induced ED ရှိခဲ့ကတည်းကငါလာမယ့်အချိန်ကငါထနိုင် 100% သေချာဖြစ်ချင်တယ်။
ငါကနှစ်ပေါင်းများစွာ ED ရှိခဲ့ဖူးတဲ့လှေတူတူပါပဲ။ NoFap ကကျွန်တော့် ED ကိုကုသပေးခဲ့ပေမဲ့ငါဂရုမစိုက်တဲ့အတွက် P ကိုငါ့ဘဝထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ဤပုံပြင်က NoFap အလုပ်လုပ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ ငါတို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်။
OP: ကျေးဇူးပြုပြီး fapping မဟုတ်ပါအပေါ်ထားပါ။ ဥစ္စာများကဲ့သို့ပုံပြင်ငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂!
သူကပြောတယ် မင်းကကုသပေးပြီးပြန်ပြန်လာခွင့်ပြုလား။ ! ပျောက်ကင်းပြီဆိုတာကိုငါသိရင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါဝမ်းသာမျက်ရည်ကျမိမယ်ဆိုရင်၊ ငါ porn ကိုနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးလို့ကတိပေးတယ်။ porn-induced ED ဆိုတာအဆိုးဆုံးပါ။
ဟားဟားငါရ။ ကောင်းပြီ၊ ပိုကောင်းလာပေမဲ့ ၁၀၀% ပြန်မရောက်သေးဘူး။ NoFap ကိုစတင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၄ ရက်တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပြီး ၄၅ ရက်တွင် MO'd လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်တစ်လလျှင် ၂ လခန့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်“ fap အချိန်ဇယား” (porn မပါဘဲ) တွင်ရှိနေခဲ့သည်။ အဲဒီကာလမှာလိင်ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်အဲဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ ED ဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့မသိခဲ့ဘူး။
ထို့နောက်ငါလိင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သောထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Koh Samui တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ငွေမပေးဘဲနေခြင်းသည် (အမှန်တကယ်မနှစ်သက်သောသူနှင့်လိင်မဆက်ဆံလိုသောကြောင့်) သည်ခက်ခဲသည်။ "ကောင်းသောမိန်းကလေးများ" နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲသည်၊ အင်္ဂလိပ်စကားမဆိုး၊ ရှေးရိုးစွဲမိသားစုများစသည်။ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်မိသည်။ တဖန်ငါ P ကို ​​fapping တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်ငါလှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ ED ပြန်လာခဲ့သည်။ ယခင်ကကဲ့သို့မကောင်းခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မသေချာသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ငါ့ကိုလှုပ်ခါ။ NoFap သည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းသတိရသည်။
သငျသညျ PI-ED လူကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမျှော်လင့်ပါတယ်! အဆိုးဆုံးပဲ
ဒါကသဘာဝကျပါတယ်။ ငါအခြေအနေ, ပေးထားတူညီတဲ့အရာသို့ချော်ဖူးလိမ့်မယ်။ ငရဲ, ငါဒီနေရာမှာ sloppy လိင်အဘို့အအခြေချ !! မင်းအခုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်နေသလိုပဲ၊ ဒါကောင်းပါတယ် ငါသည်သင်တို့ကိုကံကောင်းခြင်း၏အကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏ !!
8 ပတ်အတွင်း ... အစွမ်းထက်စွဲ။
ငါ 8 ပတ် pmod hvnt မဟုတ်သလိုငါ mo သို့မဟုတ်မီတာ ... တစ်ချိန်လုံးရှိသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောရတယ်၊ ငါမတိုင်မီက pmo'ers ၏ 90% ၌ရှိ၏ ကျွန်တော့် ED ပြproblemနာကငါ့ကိုသတ်တာပါ။ ကျွန်တော့်ဘဝပုံစံက porn ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိချေ။ အဲဒါကဘယ်လိုဘဝမျိုးလဲ။ ED သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲစွမ်းသတ္တိကိုဖယ်ရှားပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ငါအလွဲသုံးစားမှုမည်မျှနှင့်ငါ့ဘဝကဘယ်လောက်ကွာသွားပြီလဲဆိုတာကို porn ကိုမုန်းတီးသည်။ ဤဖိုရမ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကြီးကျယ်သော၊ သတင်းကောင်းကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အောင်မြင်သော၊ အစွမ်းထက်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရားထံမှအော်ဂဇင်။ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုက crazh ဖြစ်ပေမယ့်ငါကတဆင့်တိုက်ပွဲတွေ။ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုမဆိုကဲ့သို့ပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မကြည့်ဘဲနေဆဲဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရဆဲ…
porn သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အကိုယ်ပိုင်အပေါ်ခက်ခဲ 100% ရနိုင်စေဖို့ (နေဆဲ Viagra နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့) 100 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ဆေးမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါလိမ့်ရန်မအော်ဂဇင်, porn သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည် သွား. ရသောအခြား 60 ရက်ကြာပါတယ်။ သို့သော်အစပိုင်းတွင်သူကတက်လာပြီပြီးနောက်ကိုယ့်လိင်၏5မိနစ်အကြာတွင်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားသောပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဦးနှောက်အာရုံကြောကြီးနှင့်သူမပင်အနည်းငယ်ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရယ်ရတယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကိုယ့်ကို restart စတင်ဈတစ်ကညာအခါငါသာပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက porn ရန်ခက်ခဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 70% ရတဲ့ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်း 23 ဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်နေဆဲသာက်ဟာသူတို့ရဲ့ကြောင်း im ခံစားရတယ်ငါတကယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူပုံမှန်ရင်းနှီးရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါ noFap စကတည်းက Gf ဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့စတင်ချိန်းတွေ့သည်။ သူမကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွပေါင်းသင်းနေချိန်မှာလိင်ဆက်ဆံမှုကောင်းနေချိန်မှာ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာညစဉ်ညတိုင်းခံစားခဲ့ရတဲ့အရာဟာသူမအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့သမျှထဲမှာအတက်ကြွဆုံးနဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုဖြစ်ကြောင်းသူမကမကြာသေးခင်ကပြောခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်ငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်တော့မှာမဟုတ်လား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် (သို့) နှစ်လတွင်ကျွန်ုပ်သည်အားနည်းသောစုံတွဲတစ်တွဲသာရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ NoFap ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည်အသစ်ဖြစ်၏။
ငါ၏အ Mojo ပြန်ရပေမယ့် porn သို့လှည့် ...
ငါကအလွန်လွယ်ကူကွာညစ်ညမ်းသည့်အခါ reboot mode မှာထံမှတည်းခိုခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ တပတ်ရစ် Viagra ဟာ flatline ထဲက get လုပ်ပါ။ ထိုနောက်ငါ Viagra မပါဘဲခဏအဘို့အကြှနျုပျ၏ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်ကိုနှိုးဆွသလိုခံစားရတယ်သည့်အခါဒါမှငါပြန် porn မှချော်မပါဘဲနေထိုင်ကြသည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် flatline ထဲကရတဲ့ပြီးနောက် porn ကွာတည်းခိုကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့အကြံပေးချက်များနှင့်အတူမည်သူမဆို။
PS - ငါ့အတွက် Viagra သုံးတာအရမ်းထိရောက်မှုရှိတယ်။ အဲဒါကိုအများကြီးမသုံးခဲ့ဘူး၊ ပထမအကြိမ်အနည်းငယ်လောက်ပဲပြီးတော့ရပ်လိုက်တယ်။
11 နေ့ရက်များ။ PIED သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ wow 🙂
/ nofap သို့ 11 ရက်။ ငါ2ရက်သတ္တပတ်ကတည်းကအသစ်အ gf ရှိသည်, ငါ (အိုသူမ၏နှင့်အတူဝင်) လုံးဝ pm တွင်အရှုံးမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တစ်ပါတ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရင်းနှီးတယ်, ငါ့ဒစ်ကျွန်တော်နမ်းခြင်းနှင့်ပုခက်လွှဲခြင်းနှင့်သူမငါ့ကို handjob ပေးသည်စဉ်အခါတိုင်းတက်ရရှိသွားတဲ့။ ကြှနျုပျတို့ပွုတောင်မှသည့်အခါကအတန်းထဲမှာရက်ပေါင်း3။ ကျွန်တော်တစ်ဦးခဏစောင့်ဆိုင်းပါလျှင်ငါ၏အပိုကြီးအံ့အားသင့်ဖို့က, အိုပြီးနောက်နောက်တဖန်တက်တတ်၏။
ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိုးရိမ်နေဆဲဖြစ်သည် (PE သည်ကျွန်ုပ်ကိုသရဲခြောက်နေသည်), ဒါပေမယ့်အားလုံးကောင်းသွားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒီတော့ yeah, ကအလုပ်လုပ်တယ်🙂
BTW ငါအပေါ်မှာငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်မပုံမှန် gf အခါကအများကြီးပိုလွယ် porn အကြောင်းကိုမေ့လျော့ဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟေ့လူ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်တုန်းကမင်းရဲ့အခြေအနေအတိုင်းပဲ။ ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာ PMOd ရှိခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့ငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးသေးဘူး (ဘာမှသိပ်မခံစားရသလိုခံစားရတယ်)၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာအချိန်အများစုကိုမထနိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါကြောင့်တော်တော်လေးလှပသောမိန်းကလေးများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အကြှနျုပျ၏စိတ်ပျက်ဤလောကထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် NOFAP နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သိပ်မရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့လအတော်ကြာတယ်။
နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာဘဝကိုသဘာဝနှင့်တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ရယ်စရာကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အချိန်ကာလတိုင်းနီးပါးကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုအော်ဂဇင်ဖြစ်စေခြင်း (ကြာရှည်စွာခံ စား၍ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စသည်တို့) အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုကျွန်ုပ်သည်အသက် ၃၀ ကျော်ပြီ ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးဖြစ်လာသည့်မိန်းမနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးကလေးကိုမျှော်လင့်နေသည်🙂
အရှုံးမပေးပါနှင့် NOFAP ကျိန်းသေသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါငါ့အတွက်ပဲ သင်အဲဒီကိုရောက်တာနဲ့သင်ဒီမှာတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် PMO လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အစပိုင်းမှာတော့ကြက်ဆင်အအေးနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကဖြစ်သကဲ့သို့မနေ့ကငါကအရမ်းစိတ်ကျေနပ်စရာလိင် session တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံမျှဝေပါ။
ငါဒီမှာငါဘယ်လိုရောက်ရှိခဲ့သလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြမယ်။ ငါ ၃၄ နှစ်ရှိပြီ ငါ ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးစတင်ခဲ့ပြီးအသက် ၂၂ နှစ်အထိအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာမိန်းမတွေနဲ့ဝေးဝေးနေခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာအချိန်တွေများများစားစားရှိခဲ့တယ်၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူမနေခင်တိုးတက်ချင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါငါနှစ်ပေါင်းဖြတ်သန်းသွားမခံခဲ့ရသဘောပေါက်လာတယ်။ ထိုအခါငါနှင့်မိန်းမတို့အကြားအတားအဆီးပိုမိုမြင့်မားအခါတိုင်း။ အဆိုပါအတားအဆီးခုန်ဖို့မကြောက်ပေမယ့်ခုန်ခြင်းနှင့်မှန်ကန်စွာမကျကြဘူး။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က၎င်းသည်အလွန်ဝေးကွာသွားပြီဟုထင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပွားသောကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဘဝများစွာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးအရဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းရှိသော်လည်းလိင်သဘာဝမှချဉ်းကပ်မှုများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်မရှိခဲ့ပါ။
ဒါနဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေကိုရင်ဆိုင်စပြုလာတယ်။ သို့သော်အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားပြီးကျော်လွှားပြီးနောက်လွယ်ကူပုံရသည်။ ငါအမျိုးသမီးတွေနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုမိန်းမှသူတို့ကိုမဆောင်ခဲ့ရန်ခက်ခဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသိသောအခါကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာလှပတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိနေဖို့တောင်စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး။ ငါအမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်စိုက်ထူခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာမသိခဲ့ပါ။
သဘာဝကျကျငါစိတ်ပျက်မိတယ်, ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ပါ။ YBOP ကိုမတွေ့မှီကျွန်ုပ်အင်တာနက်ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပြproblemနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာလို့ထင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါ့ကိစ္စဟာစွဲလမ်းမှုတစ်ခုလို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ ဦး နှောက်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနဲ့သာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအမျိုးသမီးတွေကိုလျစ်လျူရှုထားတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ရင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုရပ်တန့်ဖို့ကျွန်မကို ၂၀၁၃၊ မတ်လအထိဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမပြီးဆုံးသေးသောကောက်ရိုးဖြင့် ၁၀ ရက်မျှနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာပြproblemနာမရှိဘူး၊ ဒါကိုငါမလိုချင်ဘူး။ လွန်ခဲ့သောလေးလတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ချိန်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုသာကြည့်ခဲ့သည်။
ငါပြproblemနာကိုကျော်လွှားချင်ရင်ငါဟာပိုပြီးစည်းကမ်းရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်။ ငါသူမနှင့်အိပ်ရာ ၀ တ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူမကိုမည်သည့်အချိန်ကမှမနမ်းနိုင်ခဲ့ချေ။ ငါခံစားနေရသောစိတ်ပျက်စရာမျက်ရည်များကျခဲ့သည့်နေ့တစ်နေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါက ၂၀၁၃၊ ဇွန် ၁၅ ရက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှုန်းကိုသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးငါက ၁၀ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ် တခါတရံမှာငါတိုက်တွန်းချက်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကစကားပြောနေစဉ်မှာကျွန်မကိုနွေးအောင်လုပ်ပေးလို့လေ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်အကြံပေးချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့သင် reboot လုပ်နေစဉ်မှာစကားမပြောနိုင်သော chats တွေမပါပါဘူး။
မနေ့ကငါအမျိုးသမီးတစ် ဦး fuck ဆိုတဲ့နိုင်! အေးဆေးတည်ငြိမ်တယ်၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့ခံစားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါသူမငါ့ကို fellatio ပေးစဉ်ငါအော်ဂဇင်ရှိသည်သည်အထိငါမိနစ် 90 ကျော်စိုက်ထူထားရှိမည်။ ငါဒီလိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်…ငါချစ်သောအမျိုးသမီးကိုထိုးဖောက်နေစဉ်တစ်နေ့နေ့မှာအော်ဂဇင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် PMO ကို ၁၅ နှစ်လောက်နေရမယ်၊ တစ်နေ့ကိုပျမ်းမျှ ၂ ကြိမ်ထက်ပိုနေပြီ၊ အခုငါ့အသက် ၃၀ ကျော်မှာ ED နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ ငါရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုကကျွန်တော့်အတွက်အကြီးမားဆုံးပြissueနာဖြစ်တယ်။
အခုကျွန်မဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နှစ်ပေါင်းများစွာသိကျွမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့နှစ်ယောက်အတူတူနေခဲ့ကြတာပါ။ သူမသည် fap နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြaboutနာများကိုလုံးလုံးလျားလျားသိသည်။ မည်သည့်အရာကိုမျှကျွန်ုပ်အားဖိအားမပေး။ ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပြုခဲ့တာကအောက်ထပ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာငါသူမ၏ထိုးဖောက်နိုင်ရှိရာခဲယဉ်းတဲ့အဆင့်အထိပင်ရဖို့ရန်ချွတ် whacking ၏အသက်အရွယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်ဖြင့်သို့မဟုတ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုခံယူရလျှင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရသော်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာအားလျော့သွားသည်။
ရှေ့သို့5ပတ်သို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။ အခုဒီအချိန်အတွက်ငါကလေးပတ်မှ ၅ ပတ်အကြားအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည် MO ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသုံးကြိမ်မြောက်အတန်ကြာမူးယစ်ဆေးဝါးအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာလည်း၊ သူမ၏ပါးစပ်ကိုစောင်းစောင်းကြည့်မိခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောဒစ်ကိုသုတ်ခြင်းအထိသေစေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဘာမျှမလုပ်သော်လည်း၊ ယခုအချိန်တွင်အမီလိုက်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတနင်္ဂနွေကိုမြန်မြန်သွားနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့်စံပြမဟုတ်သေးပေမယ့်ကွန်ဒုံးဝတ်ထားစဉ်သူမကိုထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကငါ့အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ။ ငါရော့ခ်ကိုနိုးထခဲ့ပြီးနှစ်အတန်ကြာခဲယဉ်းစွာနေခဲ့သည်။ နေဆဲခက်ခဲ, သူမ၏နှိုး။ နေဆဲခက်ခဲနေဆဲကွန်ဒုံးပေါ်ချော်။ နမ်းခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်းစတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုသွားခံစားနိုင်သည်။ fuck ဆိုတဲ့မျက်နှာကိုထောက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်တို့ doggy အနေအထားသို့တယ်ကြောင့်သွားကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုစတင်ရန်လုံလောက်သောခဲယဉ်းစေရန် ၅ မိနစ်ခန့်နူးညံ့သောလေဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါရှိနေစဉ်ငါတပြင်လုံးကိုခက်ခဲနေ၏။ ကျွန်တော့်ကိုမှားအောင်မလုပ်ပါနဲ့၊ ကျွန်မဟာ ၁၀၀% ခက်ခဲပေမယ့်မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ငါကွန်ဒုံးကိုဝတ်ပြီးငါ့အတွက်ပထမဆုံးလာခဲ့တာပါ။
ဒီဟာကလူအများစုအတွက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်တိုးတက်မှုလက္ခဏာပါ။ ငါဝေးခရီးရှည်လျားတယ်။ ငါဝေးလွန်းအလွယ်တကူငါ၏အ boner ဆုံးရှုံး။ အထူးသဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်ပါးစပ်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ။ ကျွန်ုပ်ကို ၂ နာရီခန့်လွင့်ပစ်နေလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်ပြောနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ် ငါအချိန်ယူရမည်နားလည်ပါတယ်
ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ငါချစ်သောကောင်မလေးနဲ့တောင်မှတောင်ဒစ်ကိုဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှမထိမိစေချင်ဘူး။ ငါပြန်ကောင်းလာဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းသေချာပါတယ် သို့သော်ထိုသို့ပြုရန်ထက်ကပြောသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ငါအရှုံးသမားဆုံးရှုံးသွားလျှင်၊ လိင်ဆက်ဆံရန်မခက်ခဲမချင်းမထိုးရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။ ငါကငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူနှေးကွေးနှင့်အတူ ok ပါပဲ။ ငါကစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီ post ကကိုယ့်အတွက်တစ်ခုခုချရေးဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒါကလည်းဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသက်သေပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အချိန်ပေးရုံပါပဲ
နေ့ 130: ပုံမှန် function ကိုအတူတဖြည်းဖြည်းပြန်လာ, ပြဿနာတစ်ခုတက်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ညက Nofap သည်အရူးအမူးစွဲလမ်းခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွေးဖြင့်နှိုးဆွနိုင်ခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိသည် (အထူးသဖြင့်ရှည်လျားသောသေဆုံးသွားသောအဆင့်ပြီးနောက်) ဤသည်မှာမုသားမဟုတ်ပါ။ ပြနာကငါအရမ်းချိုလွန်းလို့တိုက်ခိုက်ရတာအရမ်းခက်တယ်။ ဒါကပြaနာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန် fuck ဆိုတဲ့ !!!!!!!
Recovery ကိုမှလမ်းမ။ porn ယူတာပဲ !!
Man .. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက porn အကြောင်းသိခဲ့ရင်ကောင်းမှာပါ။ ဂယ်ရီ Wilson နဲ့သူကူညီနေတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုတော့ငါဂန္ reboot လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး .. cialis နှင့်မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုမသွားချင်ပေမယ့်ကျနော့် gf ကကျွန်တော့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူး။ သူကအရမ်းရှေးရိုးစွဲမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် PMO ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကတည်းကကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်မှုအချို့ကိုပြန်ရချင်ခဲ့တယ်။
1 ။ နောက်ကျောမတ်လ 2013 အတွက်များသောအားဖြင့်လိုအပ် 20-30 များသောအားဖြင့်သာလိင်2ကြိမ်တပတ်ရှိနိုင်တယ်လို့ .. ကိုယ့်စိုက်ထူရဖို့ပါးစပ် foreplay နှင့်အတူ cialis MG ငါ
2 ။ ယနေ့တွင် .. ပေါ်နဲ့ off cialis 5-7 MG .. နှင့် 10 ကြိမ်တစ်ပါတ်အထိလိင်ရှိနိုင်ပါသည် ..
3 ။ မတ်လ 2013..would ငါ horny ခဲ့လျှင်ပင် .. မိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်နမ်းသို့မဟုတ်မဆင်းစိုက်ထူရတော့မှ
4. ဒီနေ့ .. လုံး ၀ မ ၀ င်နိုင်တာတောင်မှ (မူးယစ်ဆေးမရှိဘူး။ လိင် ၃ ကြိမ်ဒီတခါကတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ် masturbating) (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်) .. ငါနေဆဲငါ့ကောင်မလေးအစာစားခြင်းမှစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ် .. တကယ်လို့ချိုသာရင်ငါနမ်းတာကနေစိုက်ထုတ်လို့ရတယ် ..
5 ။ မတ်လ 2013 .. .. ကထွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိ kinda တစ် crapshoot လိင်ဆက်ဆံအကြောင်းကိုအမြဲစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့
6 ။ ယနေ့တွင် .. အမြဲငါ horny ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါအများကြီးဖြစ်ပျက်ရသောပျော့သွားလျှင် .. ငါတစ်ခုစိုက်ထူဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် masturbate နှင့်အလုပ်လုပ်တယ် again..Eventually ကြိုးစားနိုင် .. ထွက်အလုပ်လုပ်တယ်!
ဒီတော့ငါ့အတှေ့အကွုံမှဤဖြစ်စဉ်ကိုပင်ငါ့ကိုအများကြီး Oing နှင့်အတူ .. အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါသည်! .. kinda ကြောင်း porn အမြဲဘဝမှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ဖို့ငါ့ကိုစေပါတယ်။ im နေဆဲရံဖန်ရံခါ cialis ယူပြီးအရှုံးမပေးဖို့တွန့်ဆုတ် .. PIED တကယ်သင်ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ထ messes .. ဒါပေမယ့်ငါဆေးကပယ် tapering နှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြောင့်အသုံးမပြုနေပါတယ် ..
ဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ကြာကြာငါပျောက်ကင်းအောင်ကုသမတိုင်မီယူ thisll ထင်ပါသလဲ .. အားလုံးစစ်ပြန်ထံမှ? .. ငါအိုတစ်ခါတစ်ရံလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးသိကြ ..
နီးပါး 50 ရက်အတွက်အစီရင်ခံစာ!
ဒီနေရာမှာကိုယ့် nofap ၏ပြီးနောက်နီးပါး 50days မရှိညစ်ညမ်းဖြစ်ကြောင်းကို!
URGES: ညတိုင်းညတိုင်းလိုလိုလားလားနဲ့လမ်းပေါ်မှာပူပြင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တိုင်းမင်းရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏဟာမျှမျှတတရှိပေမယ့် PMO ကိုလုံးဝမတိုက်ဆိုင်ဘူး၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကအခုငြင်းနေသလိုပဲ ' ကြောင်းများအတွက်အတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
INSOMNIA - ၇ နာရီ ၈ နာရီအနှောင့်အယှက်မရှိအိပ်မောကျနေတုန်း ၂ နာရီ ၃ နာရီတိုင်းနိုးနေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆေးလိပ်ကြောင့်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားရတော့မယ်။ ဒါကနောက်ဇာတ်လမ်းပဲ။
FLATLINE: ဈအခြား flatline ခဲ့, ကတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်များကဲ့သို့ကြာမြင့်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကတည်းကကိုယ့်အားလုံးမှာမကြောက်ခဲ့များနှင့်အလုပ်နှင့်စာဖတ်ခြင်းအာရုံစိုက်ငါ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲ။
စိုးရိမ်ပူပန်မှု - စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြနိုင်သောအရာသည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ (ဤသို့သောအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းအတွက်မျက်ရည်ကျနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုသတိပြုမိသည်)
ED: ဒါကအကောင်းဆုံးအပိုင်းပဲ။ တကယ်တော့မနေ့ကငါတစ်ညငါ့ကိုဖြားယောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သောပူပြင်းတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ သူကမနေ့ကငါ့အိမ်ကိုလာတယ်။ ငါတို့စကားစပြောကြတယ်၊ အေးဆေးလာပြီးရင်းနှီးမှုရစေတဲ့အရာတွေမကြာခင်ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်နေပြီ! ငါထင်တာကငါဟာအစကနေဆုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီး ၁ နာရီလောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကတော့ ... ငါမလိုချင်ဘူး ... CUM! ဒါကြောင့်ငါခုခံတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ ED ဟာပျောက်ကင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကွန်ဒုံးကိုမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့မလိုအပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ပြီးနောက်ငါ နောက်ထပ်သွားပြီးကွန်ဒုံးဝတ်နေစဉ်ငါ့စိုက်ထူမှုကိုစစ်ဆေးပါ။
ဒီတော့ဒီမှာ၊ ငါ ၆၀ ရက်အောင်မြင်ဖို့ရက် ၉၀ ရောက်နေပြီ။ ကံကောင်းပါစေ၊ သတ္တိပေးပါ။
ပဌမလအစဉ်အဆက် 15 နှစ်အတွင်းအတွက် pornfree ။ ပြင်းထန် PIED နီးပါး (29 နှစ်အရွယ်ကညာ) ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
sh ** t လိုကြာချိန် ၄ လကျော်နေပြီး၊ ငါ့မှာ MO ၇ ရက်ရှိပြီ။ အဲလိုခိုင်ခံ့တဲ့စိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုငါမမှတ်မိဘူး၊ မင်းရဲ့စိုက်ထူမှုဟာ“ သော့ခတ်” တဲ့အခါကောင်းတဲ့ခံစားမှုပါ။ ငါ့မှာနံနက်ထင်းထည်လည်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ့အားနည်းသောစိုက်ထူမှုများအတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသံသယမဖြစ်မိအောင်ကျွန်တော်စကားမပြောနိုင်တော့ကြောင်းမယုံနိုင်ဘူး။ : :)
19yo - နေ့ ၇၇ ရက်တွင်တော်တော်များများပျောက်ကင်းသွားသည်
မနေ့ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကျွန်တော့်နေရာကိုရောက်လာတယ်။ ငါတို့အတူတူအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့လိင်3ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါပြောရမယ့်အချိန်က ၁၀၀% ခက်တယ်၊ ကြိုတင်ပြီးပြောနေစဉ်မှာ ၁၀၀% ဖြစ်ပေမယ့်ကွန်ဒုံးကိုတင်လိုက်ရင်ပုံမှန်အတိုင်းပျော့ပျောင်းသွားတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၈၀% မှ ၉၀% အထိခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ငါသူမရဲ့အတွင်းထဲရှိတချိန်ချိန်မှာလိင်ဆက်ဆံတုန်းက ၁၀၀% အခက်အခဲရှိခဲ့တာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ ၇၇ ရက်မှာလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ငါလုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သော။ ငါပြီးပြည့်စုံသောလိင်များအတွက်အမှန်တကယ်အားကောင်းတဲ့စိုက်ထူရသည့်အခါတိုင်းငါဒီမှာ post လိမ့်မယ်။ သို့သော်ယခုအချိန်သည် ၇၇ ရက်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်ပြန်လည်ပြသခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၁၂ ကြိမ်မှာတစ်နေ့ကို ၁ ကြိမ်အကြိမ် ၁.၂ ကြိမ်ကတည်းက porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပါ။ ကိုယ့် pied အကြောင်းရှာတွေ့သောအခါအကြှနျုပျ၏ ED အဆင့်ကိုမဆိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ PMO နှင့် MO အားဖြင့်ငါ 12% ခဲယဉ်းလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများကိုနမ်းခြင်းအားဖြင့်ငါဟာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ၃၅ ရက်ကြာအိုမှရှောင်ပါ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအော်ဂဇင် ၁၀ ခုနှင့် MO မှ ၁၀ ခုပါ ၀ င်သည်။ ယခုအချိန်အထိ flatline ကြုံတွေ့ဖူးခြင်းမရှိ။
ငါ (နေ့ ၅၀ ဝန်းကျင်) reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဒစ်သည် ၆၀-၇၀ ခန့်ခဲယဉ်းသည်။ ငါ reboot စလုပ်ကတည်းကဒီကြက်နဲ့တွဲနေခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါ rewiring မပါဘဲအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေထင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက၊ သင်က porn ကိုပိတ်ခြင်းအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်။ rewiring မပါဘဲ rebooting လုပ်ရတာပိုကြာတယ်။
nofap ကိုစကတည်းကငါ့ကောင်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေဆီပြန်ရောက်လာတာနဲ့နောက်ဆုံးတော့ငါ့စိုက်ထူမှုတွေကိုပြန်ရတော့မယ်။ သို့သော်ယခုငါမိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပြောင်းရွှေ့သောအခါငါ့နှလုံးသားသည် စတင်၍“ ငါမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးပါကမည်သို့ပြုမည်နည်း” ကိုစတင်ရှာဖွေသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ဒါကြောင့်သင် "dude ကိုသာအနားယူ" ထက်အခြားဒီနှင့်အတူကူညီရန်သင်ယောက်ျားတွေတွေ့ပြီဆိုမဟာဗျူဟာများရှိပါသလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာဟာငါ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ပြောတာကပြီးတာထက်ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။
ပညာရေးကိစ္စများ 17 ရက်ပေါင်းမှာပျောက်ကွယ်သွား
ငါမကြာသေးမီကကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းနှင့်အသေးစိတ်သို့မပါဘဲ, ငါစွမ်းဆောင်ရည်မရှိခြင်းကိုအထောက်အကူပြုအဖြစ် PMO အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အသက်က (၄၀) ပဲရှိပါသေးတယ်၊ ED အတွက်ဆေးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကသူမနှင့်မပေါင်းတော့ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ငါကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်ငါမှာပြissuesနာရှိနေသေးမလားဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ရက်အတော်များများရှိတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ် အချိန်၏ 40% ။ လှပသောအမျိုးသမီးများသည်အဆင်သင့်ရှိပြီးဆန္ဒရှိကြပြီးကျွန်ုပ်မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ဆိုးဝါးသောကြောင့် PMO ယုန်တွင်း၌ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။
ငါမတော်တဆဒီ reddit တွေ့ရှိခဲ့ကြောင့်အချိန် nick ၌ရှိ၏။ ငါအခု ၂၁ ရက်ရှိပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာငါကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျော်သွားတယ်။ သူမ (၂ ပတ်မတိုင်မီ) တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်သူမနေထိုင်ခဲ့သည်မှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကျွန်တော့်ခေါင်းကို“ နှိပ်လိုက်တယ်” အရာအားလုံးဟာအလုပ်ပြန်စကြပြီ။ ငါနောက်တဖန်ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်မပြောပြလိုပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။
၁၇ ရက်ကစူပါအင်အားကြီးလား။ ငါမသိဘူး။ အခုတော့စူပါပါဝါဒဏ္myာရီကိုကျွန်တော်သေချာပေါက်မယုံနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာသူမအတွက်ပိုပိုပြီးခိုင်မာလာတယ်၊ ညမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ဖူးတဲ့အရူးအမူးစွဲလမ်းမှုလို့တွေးပြီး“ စိတ်ဓာတ်ကျဖို့” မကြိုးစားခဲ့ဘူး ငါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနှင့်အတူအဘယ်သူရှိ၏ကြောင့်ရယ်စရာစိတ်ကူးယဉ်၏မဟုတ်။ NoFap ကပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လျှင်တောင်ကျွန်ုပ်သည်မြန်လွန်းမည်ဟုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ငါအရင်ကထက်ထိန်းချုပ်မှုပိုခဲ့ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာတွေကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သင်တို့ကိုဒီလူတွေအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် YEARS အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ယခုတွင်ပြnowနာများရှိခဲ့ပြီး ၁၇ ရက်အတွင်းဤစိန်ခေါ်မှုအတွင်းအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်း။ ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ NoFap ကြောင့်လားဆိုတာကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ED ပြpastနာတွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချဖို့အချိန်ပိုရဖို့အပြင်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုခံစားမိဖို့ပါ။ စူပါပါဝါများလားမတန်ဘူးလား။
, ယောက်ျားတွေ Thank you! performance စိုးရိမ်စိတ်ကိစ္စများ squashed ။
ကျွန်ုပ်သည်ကိုရီးယားတွင် ၁ နှစ်နှင့် ၆ လခန့်ရှိခဲ့သည်။ တစ်ကြိမ်မှာကျွန်မမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ်။ ။ အတိတ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုပြproblemsနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ noFap ကိုကျွန်မစတင်ခဲ့တယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ အဲဒါအံ့ဖွယ်နည်းနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ရက်ပေါင်း ၄၀ လောက်အပြီးပြnoနာမရှိပါဘူး။
ကောင်းပြီ, ထိုမိန်းကလေးနှင့်ငါအချို့အခက်အခဲများနှင့်တက်ခြိုးဖဲ့၏။ ငါအရှက်ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်-a-နေ့, နောက်တဖန် PMO စတင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံ။ So..when ငါအချို့သောကိစ္စများအဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြီးသားကို set up ဖူး, တစ်ဦး NEW မိန်းကလေးတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါပြဿနာ? ငါလွယ်လွယ်ကူကူအလုံအလောက် up ပြုလုပ်ရနိုင်ပေမယ့်လိင်အဘို့အချိန်ကိုလက်မှာအခါ, ငါ့နည်းနည်းရဲ့ buddy နွေးထွေးသောနေ့လည်ခင်းအပေါ်ကျသောနှင်းရည်ကဲ့သို့ dissipated ။ သူမသည်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ embarrassed..I ငါလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်သိလုံးဝဖြစ်ခဲ့သည်။
မနေ့ကငါ noFap နဲ့အတူ ၃၅ ရက်နေတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကဘာမှမရှိပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးရုံပဲ။ မနေ့ညကငါတို့သုံးကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်၊ ငါထတက်အောင်မြင်စွာစုစုပေါင်းကြိမ်ငါးခုလာ။ , ငါအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်
အကောင်းဆုံးအပိုင်းလား အကြှနျုပျ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကာလလက်တွေ့ကျကျ Non- တည်ရှိခဲ့သည်။ သူပြန်လာရင်ငါသူ့ကိုနမ်းပါလိမ့်မယ်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူမကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုသူခံစားခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့်ငါပဲယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ချင်တယ်! ငါသူမကိုစိန်ခေါ်မှုအကြောင်းပြောပြပြီးတာနဲ့ငါတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားထိန်းသိမ်းဖို့သွားမယ်။ အခုတော့လွယ်လွယ်ကူကူ - အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ ငါလှုံ့ဆော်မှုတွေအများကြီးခံစားရတယ်။ သို့သော် ဦး နှောက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သွေးဆောင်မှုသည်အချိန်တန်လျှင်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်၊ NoFap မတိုင်မီနောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုသုံးခုသည်တစ်ဝက်လောက်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏လက်ကိုကြက်တစ်ကောင်ကဲ့သို့အသုံးပြုရန်နှင့်မလာရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ PMO ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူမနှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံပြီးနောက် PMO ကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်လုံလောက်စွာရရှိခဲ့သည် ကြိမ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ထက်ဝက်ထက်ပိုကောင်းခဲ့ပေမယ့်ငါပျော့သွားမတိုင်မီ jackhammer နှင့် finish ကိုနိုင်ခဲ့သည် (ကံကောင်းတာကသူမကြောင်း shit ကိုချစ်၏) ။ ဒုတိယအကြိမ်ငါပျော့ပျောင်းမရရန်ချက်ချင်းထုရိုက်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်3မိနစ်ခန့်ကဲ့သို့ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်ငါပျော့ပြောင်းပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့လာပြီးတကယ်ကိုရှက်ရွံ့နေပြီးလုံးဝနို့စို့သွားသည်။ အလွန်မြန်လွန်းခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
လိင်ဆက်ဆံဖို့ခဏတာအနားယူဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါခဏလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူကငါ့ကိုတကယ်ယုံကြည်လာတာနဲ့အမျှသူမမှာငါထက်ပိုကြီးတဲ့ပြhadနာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမသည်တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့သူမ၏မိဘများထံအိမ်သို့ပြန်ခဲ့ရသည်။ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၃ နှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး၊ စစ်မှန်သောရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားခဲ့ရပြီး NoFap သည်ကျွန်ုပ်၏ PIED ကိုကုသပေးမည်ကိုသိရှိခဲ့ရသည်။ ယခု kegels လုပ်ခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး orgasms အမြောက်အများကိုပြန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ငါအကျဉ်းဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါဆိုလိုတာက, ဒီစိန်ခေါ်မှုမဝင်ခင်အများကြီးပိုကောင်း။ 0% ED, ငါဖြေလျော့ပေးခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိသော်လည်းဘယ်တော့မှငါမချိုဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလိုချင်တာထက်ပိုမြန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီတစ်ခေါက်လုံးမှာလိင်ကိစ္စမရှိဘဲထုံးစံပါပဲ။
PIED နေဆဲ sensitivity ကိုကိစ္စများရှိခြင်း, သွားပြီ
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး Streak သစ်ကို Streak ကောင်တာအဆိုအရ 114 ရက်ပေါင်းဖြစ်ပါသည်, 83 ရက်နေ၏။
အားလုံးနီးပါးအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲလည်ပတ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကလေးနက်သောချစ်သူရည်းစားရသွားသောအခါအရာများသည်ယခုပုံမှန်အနေအထားဖြစ်သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းသုက်မတတ်နိုင်မီ, ထို့နောက်ငါမှာအားလုံးတက်ရနိုင်ဘူး။ ယခုငါထပြီးသန္ဓေတည်နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်းပါးစပ်နှင့်မိန်းမကိုယ်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်အပြည့်အဝစိုက်ထူရန်အခက်အခဲရှိသေးသည်။ ငါအရင်ကထက်အာရုံခံစားမှုပိုများတယ် (ငါမထိုးဖောက်ခင်ကတည်းကငါအခြေခံအားဖြင့်ငါ၌ရှိ၏ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ရတယ်။ သူကပြောတယ်အရာမခံစားရနိုင်ဘူး), ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာအချို့မှိုင်းနေဆဲရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။
မည်သူမဆိုဒီမတိုင်မီဒီကြုံတွေ့ခဲ့သလား အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုလား။ အရာရာတိုင်းသည်အချိန်ပိုမိုလိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်လုပ်သင့်သောအရာများရှိလျှင်မသေချာပါ။
မနေ့ကလိင်ခဲ့များနှင့်လုံးဝကြောင့် PMO မပါဘဲဘယ်လောက်ကြီးမြတ်မေ့လျော့ကြပြီ။
ငါ PMO ဖြစ်တဲ့အခါငါလိင်၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ED နှင့်အခြားပြissuesနာများစွာရှိသည်။
ငါကကြိုတင်ဆုံးရှုံးဖို့အရမ်းနီးကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါမတိုင်ခင်ညကအရမ်းကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့တယ်၊ ငါ PMO နီးပါးရှိခဲ့ပေမယ့်ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး။
အခုတော့ fuck ဆိုတဲ့ကြာမြင့်စွာနေကြပြီး, ငါ့ဒစ်ခက်ကျောက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါစီးဆင်းမှုနှင့်အတူသွားကြဖို့ကဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ဒုံးကိုဝတ်တာတောင်ပြaနာမရှိဘူး။ ဒါကရိုးတံကိုမလှိမ့်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ၅ မိနစ်လောက်လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာကျွန်တော့်ငပဲဟာအားနည်းသွားတယ်၊ အဲဒါကနေ့အချိန်မှာကျိန်းသေကျိန်းသေဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကွန်ဒုံးသည် spunk ဖြင့်ပြည့်နေသည်။ ဒီလောက်ငါတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး ငါဘယ်ရောက်နေမှန်းငါစဉ်းစားမိသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ငါ nofap ကို ၂ နှစ်လောက်ပိတ်ထားတယ် စာရင်းပေးသွင်းသူလုံးဝနီးပါးမရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဤ subreddit တွင်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းသည် ၂၈ ရက်ဖြစ်သည်။ ငါ2အထိရှိနိုင်ပြီးဒီအချိန်ထက်ကျော်လွန်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သငျသညျယောက်ျားတွေများအတွက်အလွန်လျင်မြန် 100 ရက်ပေါင်းအစီရင်ခံစာ! ED / PA ဆိုပြီးကုသပေးခဲ့!
ငါ Performance Anxiety နှင့် Delayed သုက်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတူအချို့သောပြissuesနာများကြောင့်ငါ noFap စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်လကျော်မှာကျွန်မမှာဘာပြissuesနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မဟာမကြာခဏ ၅ ကြိမ်မှ ၆ ကြိမ်အထိလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးတစ်မိနစ်အတွင်းမှာပင်သုက်ပိုးပြန်လည်ခဲယဉ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ် ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့ရည်းစားကအဲ့ဒါကိုသိပြီးအရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင် porn နဲ့ masturbation ကိုရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီဟာကပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါသွားစရာလမ်းအတော်များများရှိသေးတယ်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောမကြာသေးမီကရရှိခဲ့သောအောင်မြင်မှုအားလုံးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ မင်းကိုဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ငါ ၁၁ နှစ်ကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွဲလမ်းနေပြီး၊ ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာတော်တော်လေးသိသာထင်ရှားတဲ့ ED ပြproblemsနာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူပြီးမှသာလျှင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ဆရာ ၀ န်ထံသို့သွားခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေပြီးသင်အားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တာသေချာပါတယ်။ ငယ်ရွယ်ပြီးကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားလေးကဘာကြောင့်သိသာထင်ရှားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေခံစားနေရတာလဲဆိုတာကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ငါအသည်းအသန်ရှာဖွေခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က YBOP ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမကြာမီအစက်အပြောက်များသည်စတင်စတင်ခဲ့သည်။
အခုတော့အောင်မြင်မှုပေါ်သို့။ အခု ၁၀ လလောက်တကယ့်ကိုလှပပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အရင်ကလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမဲ့၊ ငါ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်။ နောက်ဆုံးမှာ YBOP ကိုသူမပြmyနာတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်မဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမကျွန်တော့်ဘေးမှာကပ်ပြီးကျွန်မတို့ဒီဟာကိုဖြတ်ကျော်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချစေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတစ်လကျော်ပြန်လည်စတင်နေပြီ, ငါကြီးမားတိုးတက်မှုသတိထားမိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကျန်းမာရေးပိုမိုကောင်းမွန်လာသည် (ဦး နှောက်မှေးမှေးမှိန်သွားပြီ၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုလျော့နည်းသွားပြီ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုလျော့နည်းလာပြီးဘ ၀ သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုကောင်းပုံရသည်) ။ နှစ်ရက် (ငါခုနစ်ကြိမ်ထဲကသုံးခု O'd) ။ အခုတော့သတိရပါ၊ သူမကကျွန်တော့်ကို BJ ပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေခဲ့တယ်ဆိုတာ (ငါဘယ်လောက်ကြာကြာခံနိုင်ခဲ့တယ်) ကိုတုန်လှုပ်သွားခဲ့တယ်။
မနေ့ညကငါတို့သုံးကြိမ်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမကျွန်တော့်ကိုခက်ခက်ခဲခဲခေါင်းဆောင်းတွန်းခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်ကျိန်းသေစဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်မတို့ ၂ နာရီလောက်ကြာခဲ့တယ်၊ ငါသူမရဲ့အော်ဂဇင်ကို ၁၂ ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ် (သူမတောင်ရှူရှိုက်ပြီးသူဟာသူမတွင်အကောင်းဆုံးသောအော်ဂဇင်အချို့ဖြစ်သည်)
ဒီဟာကပြီးပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်လောက်အထိငါလာပြီးပြီလဲဆိုတာအံ့သြမိတယ်။ အရင်ကသူမငါ့ကိုပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ငါစာသားတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အချိန်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ပြီးအောင်ခဲ့ရသည်။ အခုတော့သူမကငါ့ကို BJ ပေးပြီးငါပူဖောင်းလိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ * TRIGGERS ၏အဆုံး *
ယောက်ျားတွေ၊ ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီး reboot ကာလတစ်ချိန်ကတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်ဖူးပြီးတစ်နေ့ မှနေ၍ တော်တော်များများကို rewire လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ လွန်ခဲ့သောလများကလိင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်ကြားဖူးခြင်း၊ ယခုငါသူမ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနည်းငယ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအတော်လေးကြာမြင့်စွာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
-Brain မြူထွက်လာပေမယ့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့အနီးဘယ်နေရာမှာမဆို။ ငါပိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်တယ်, ငါ့စိတ်ကိုရှင်းလင်းထင်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝရုံပိုကောင်းပုံရသည်။
- ညပိုင်းစိုက်ထူခြင်း (ကျွန်ုပ်နိုးလာပြီးကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ခက်ခဲကြောင်းသတိပြုမိပြီးနှစ်များတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ)
-Successful လိင် (သော်လည်းတစ်ဖန်ငါသူမ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်ဆွလိုအပ်ပြုပါ, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင် PMO qutting မတိုင်မီမဖြစ်နိုင်ခဲ့)
သာ 12 ရက်အကြာမှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသ ED!
ဟေ့ယောက်ျားတွေ၊ မင်းအားလုံးကိုမင်းရဲ့ update / လှုံ့ဆော်မှုပုံပြင်ပေးချင်တယ်။ ငါ floppy wiener နဲ့လိင်မဆက်ဆံလို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကစပြီး nofap ကိုစခဲ့တယ်။ ဤနေရာတွင်မူရင်းစာမူ - http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2jnl6i/when_will_ed_subside/
ဒါပေမယ့်မနေ့ကငါက horn တော့ fuck ကောင် fuck ကောင် said ပြော it တော့သူက fuck တော့နောက် shot ထပ် give ပေးပါ့မယ်။ ဒါ pumped! ငါ ၈ စက္ကန့်လုံးလုံးကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါတစ်ခုခုကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီလို့ခံစားရတယ်။ ED ရောဂါခံစားနေရတဲ့တခြားသူတွေအတွက်အကြံဥာဏ်အချို့၊ ကြိုတင်ပြီးကြိုတင်မှာယူမှုပြုရန်သင်အများကြီးလှုံ့ဆော်မှုပြုပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင့်အတွက်ကွန်ဒုံးကို ၀ တ်ဆင်ထားလျှင်တကယ်အထောက်အကူပြုသည်။
ခိုင်မာတဲ့ fapstronauts နေဖို့! ဤသည် shit က toooootally တန်ဖိုးရှိပါ!
ရက်ပေါင်း ၉၀ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုကျန်သေးတယ်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ လောက်ငါဟာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်မရှိ၊ porn နဲ့ဘာမှမရှိဘူး၊
မိန်းကလေးများသည် ပို၍ ပူပြင်းသည့်ပုံပေါ်သည်။ ထိုမြည်း xD ၏ gimps များရရန် ပို၍ စိတ် ၀ င်စားသည်။ လူမှုရေးယုံကြည်မှုမြင့်တက်လာသည်။ ငါမနှစ်သက်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေးများလည်းလျော့နည်းလာသည်။ စိတ်ကျဝေဒနာပျောက်ကွယ်သွားပြီးစိုးရိမ်စိတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ၃ လကစတာပါ၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ဒီအရာအားလုံးရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုကျွန်တော်စပြီးသိမြင်လာပါပြီ။
ငါကတော့မိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ ED နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်။ ငါကစလုပ်တုန်းကသူတို့ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုပြီး sexier ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအခြေခံအားဖြင့်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို jizz ပြီးတော့ Boom သေတဲ့သူကိုကျန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ နေ့ ဒါကဆေးရုံမှာတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တယ် (ငါ collage xD မှာမကြည့်ဘူး။ ) \_ t ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးငယ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာ xD နဲ့လုံးဝထိုက်တန်တယ်၊ ၃ နာရီကြာအောင်စောင့်နေတုန်းမှာအရမ်းရှက်စရာကောင်းတယ်။
ii အမှန်တကယ်သင်သည် porn ထွက်ခုတ်ဖြတ်လျှင်ယုံကြည်နှင့်သင့်လိင်တံနှင့်အတူကစားခြင်းသို့မဟုတ်သင့် hard ပြန်စိုက်ထူရှိခြင်းရန်သင့်အားရရှိသွားတဲ့လျှင်ကြည့်ဖို့ကထွက်စစ်ဆေးနေရပ်တန့်။ ငါအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြသည်။ ငါ့ကိုယ်ထဲကအအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်နှင့်ငါ့ဒစ်နှင့်အတူ fiddling ကြောင့်အချိန်မအတွက်မိန်းကလေးတွေကိုကျောကိုချိုးဖောက်ဖို့ကျွန်မကိုတယ်။ ငါ့အဘို့ atleast
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate နိုင်ခဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်; D ကို
ငါ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ, အများကြီးလျော့နည်းပါက w / o ခက်ခဲရ, ငါကစောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့ပြီးကတည်းကငါကျိန်းသေ im ဒီမှာအမှုအရာပြီးမြောက်ကဲ့သို့ခံစား!
[မျှမျှတတဂရပ်ဖစ်] New ကိုစတင်ဖို့
ငါအကြောင်းအတော်လေးပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လေ့ဖြစ်သကဲ့သို့, ဒီအကြောင်းပြောနေတာထူးဆန်းပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုစကားလုံးများဖြင့်ထွက်ပေါ်လာရန်ကူညီနိုင်သကဲ့သို့ဤပြissueနာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ / အားပေးမှုအနည်းငယ်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
နောက်ခံနည်းနည်းအနေနှင့်ကျွန်တော်သည်အဝလွန်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကကိုယ်အလေးချိန်အလွန်ပေါင် (၉၀ ပေါင်) ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လကကျွန်ုပ်သည် (နောက်တဖန်ထပ်မံ) ၉ နှစ်ဆက်နွယ်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာချစ်သူတွေထက်ပိုပြီးဘာမှမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါဟာငါ့အတွက်မှန်ကန်သောသူကိုရှာပြီးမိသားစုတစ်ခုထူထောင်ရန်ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်ငါလိုအပ်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ကောင်းပြီ၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာငါ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတချို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုဂရုစိုက်ပြီးကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုမိုတွန်းအားပေးရုံမျှမကမြင့်မြတ်သောသတ္တိမရှိပါ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲငါဟာအတော်လေးလေးလံသွားပြီးငါ့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုခေါင်မိုးပေါ်လျှောက်သွားသလိုခံစားရတယ်။
အစဉ်မပြတ်ငါအများကြီးချွတ် jerked ခဲ့သည်။ တစ်ရက်လျှင် ၃-၅ ကြိမ်ကဲ့သို့ပင်၊ အကယ်၍ ထိုနေ့တွင်အခြားဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါက ၄-၈ နာရီအတွင်းကြာသောအစည်းအဝေးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကြားဖူးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ဒီအတော်လေးကတိကဝတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်လည်းအလွန်တင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားလေ့ရှိပြီးအော်ဂဇင်သည်များသောအားဖြင့်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
ငါအရမ်းအစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလိုချင်နေကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နာကျင်မှု (သို့) မညီမျှမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့အတွက်အများကြီးမများပါဘူး။ အိပ်ခန်းထဲမှာလိင်ကြမ်းတမ်းတဲ့လိင်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကို porn မှာကြည့်ချင်တဲ့ပြင်းထန်မှုနဲ့မတူပါ။
ဒါကြောင့်လအနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်ကိုယ်တော်ရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့အခါငါထပ်ချိန်းတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတကယ်မ ၀ င်တဲ့ယောက်ျားစုံတွဲတစ်တွဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အဲဒီရက်တွေထဲကတစ်ခုမှာငါကောလိပ်တက်ဖို့ချိန်းတွေ့သူတစ် ဦး (နောက်ဆုံး - ထပ်ခါထပ်ခါကာလတစ်ခေါက်) ထဲရောက်သွားတယ်။ လုံးဝငါ့အသက်ကိုထဲက။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့အတကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့အရာရှိခဲ့ပါတယ်ထွက်လှည့်။ သည်အခြားကောင်လေးနုတ်ဆက်ပါတယ်။ အရင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဖူးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမင်္ဂလာပါ။
ဒါကြောင့်တချို့အချိန်ဖြတ်သန်းနှင့်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရက်စွဲများအပေါ်သွားပါ။ အမှုအရာမိုးသည်းထန်စွာပူ-and get, ငါ့ကိုယ်ကဒီကောင်လေးအဖြစ်ဘဝမှာမည်သူမဆိုအပေါ်လှည့်ခဲ့ဖူးဘူး, ဆိုကြပါစို့။ သူကအားလုံးလက်ျာခလုတ်တာမျိုး။ စမတ်, kinky, cuddly, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အသံတိတ် strong-and type ကို, ကြင်နာ, ရိုးရိုးသားသား, (ယခင်အဏ္ဏဝါ) မထိုက်မတန်။ အကြှနျုပျ၏သာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသူ့ကိုစိတ်ခံစားမှုပြသနိုင်ဖို့ထိုသို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါကသူငါ့ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ဦးကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်သူ၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်ပြောပြနိုင်ပါ။
ဒါဆိုဘာမှားလဲ ကောင်းပြီ၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကသူနဲ့ငါ့ရဲ့စိုက်ထူမှုကိုငါဆက်မဆုံးရှုံးတော့တာပဲ။ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲ, ငါရုံခဏအားလျော့သွားပါ။ သူ့ရဲ့ handjobs တွေဟာမလုံလောက်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ exes တွေအားလုံးနဲ့တူသလိုပဲ၊ ငါဟာအမြဲတမ်းခက်ခဲပြီး cum ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူရှုပ်ဖို့လိုတယ်။
အကြိမ်အနည်းငယ်အတူတူနေပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုကြည့်။ “ ခင်ဗျားကအားလျော့နေတယ်။ ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိသလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးကချက်ချင်းပဲကွဲသွားတယ် သူ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်တွေအနည်းငယ်ကျနေတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူမကြည့်ဖူးတဲ့ငါရဲ့ဘေးအခြမ်းကသူရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကငါကိုထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ ဒါကသူ့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင် သူဟာအမှားလုပ်မိတာကိုမသိတဲ့ခွေးကြီးကောင်နဲ့တူတယ်။
ငါသူ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးနမ်းလိုက်တာကသူငါ့ကိုဘယ်လောက်အထိလှည့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာငါပြောခဲ့ပေမဲ့ငါသောက်တဲ့အခါမှာငါထွက်ပြေးဖို့ခဲယဉ်းခဲ့တယ် (သစ္စာမရှိပေမယ့်အမှန်တရားပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့မဟုတ်ဘူး) ထိုညတွင်သူနှင့်အတူကျွန်မထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါသုံးနေတဲ့ပြင်းထန်မှုကနေတကယ်နာကျင်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုအော်ဂဇင်ရှိနေတာကိုသူဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။
သူ၏စကားများကကျွန်ုပ်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သရဲခြောက်နေသည်။ ငါအမှားတစ်ခုခုလုပ်မိသလိုခံစားရတယ်။ သေခြင်းတရားနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမယူခဲ့ပါ။ ဒါဟာငါသည်လည်း porn ၏ terabyte အကြောင်းကိုဖျက်သိမ်းထိုညဉ့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ထိန်းသိမ်းထားသောတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းမှာသူငယ်ချင်းများနှင့်ချစ်သူများဟောင်းမှကျွန်ုပ်ထံပေးပို့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ငါစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေမည့်အစားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်ဟုခံစားရသည်အထိ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်ပိတ်ထားသည်။ ငါအစဉ်အဆက်ကြောင်းအချက်ရလျှင်။
ကောင်းပြီ, ငါအားနည်းချက်ကိုဖြစ်ခြင်းမှာစို့။ လိုပဲတကယ်ပဲမှာကစို့။ ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူမဖုံးကွယ်ချင်ဘူးလို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဒါကြောင့်နောက်တစ်ပတ် (တစ်ပါတ်အကြာ) ကျနော်တို့အိပ်ရာထဲလဲနေချိန်မှာသူကဒီကိစ္စကိုအမှန်တရားပြောပြခဲ့တယ်။ ငါကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမလုပ်ဘဲဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ယောက်ျားအများစုဟာအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်စွမ်းကိုပြန်ရကြပြီး ဦး နှောက်ကအဲဒီလိုပြင်းထန်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ရပ်တန့်သွားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ရှည်သည်းခံ။ သူနှင့်အတူအဆင်ပြေသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။ သူ၏တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းမှာ“ သင်ယခုတစ်ပတ်ရာ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်မဟုတ်လော” ဟုဖြစ်သည်။ ငါ coyly“ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး” လို့မပြောခဲ့ဘူး
တစ်ပါတ်အကြာမှာငါတစ်ချိန်လုံးကြိုးစားပမ်းစားနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုကစားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူကကျွန်တော့်ကိုအတော်အတန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်သူ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ကောင်းသောခံစားရခဲ့ပေမယ့်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတို - သူရောက်လာတယ်၊ ငါမလာဘူး၊
ဒါကြောင့်ယခုငါဒီနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချို့သောအရာများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ “ ငါကငါ့ဟောင်းကိုတကယ်ချစ်လို့ဒီအသစ်ကမသေချာဘူးလေ။ သို့မဟုတ်“ ငါသောက်စရာများလွန်းတယ်။ ” သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များအခြားအရေအတွက်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်စွဲခြင်းနဲ့မရင်ဆိုင်မိအောင်ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။
tl; ဒေါက်တာတစ် ဦး ရက်ကျော်ပြီအဖွဲ့ခွဲပြီးနောက်အံ့သြဖွယ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းစွက်ဖက်မှုရှိကြ၏။ ငါပြtheနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှု / စိတ်ပျက်စရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့နေရာတစ်ခုလိုအပ်တယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ယောက်ျားတွေ။ ရှည်လျားသော post ကိုများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။
၁၇ ရက်ထဲ၌၊ SO နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်မှာ PIED (မကောင်းပါ) ငါသေနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အလားတူအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှမထွက်နဲ့ သငျသညျကျိုးပဲ့မဟုတ်ပါဘူး, သင်ရုံဝေး PMO ထံမှအချိန်လိုအပ်ပါတယ်။
Day9- PIED မွာ
ငါသည်ငါ့ post ကို PIED မျှသားကောင်များကိုရွေးကောက်ပြီးဟုစတင်ရန်ချင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ ED သာ Perfomance တော့ပူပန်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းထင်လျှင်, ဒီ post ကိုသင်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်အံ့သောငှါနားလည်ခြင်းကကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်သာရှိပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် PMO စတင်ခဲ့ပါသည်။ ငါ (ငါဘာသာရေးဖြစ်ခဲ့ဘူးသောကြောင့်) Streak အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုရှည်လျားခဲ့ပေမယ့်ငါ 18 အခါတစ် ဦး 12 လတစ်လရှိခဲ့ပါတယ်, ငါ7နှစ်အရွယ်မှာငါ PMOing 13xaစတင်ခဲ့ သီတင်းတစ်ပတ်ကြာတော့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတယ် သို့သော်ပြitနာဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ရေကူးသူလည်းဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်အထက်တန်းကျောင်းအသင်း၏ကပ္ပတိန်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ နောက်ဆုံးသောပြည်နယ်ချန်ပီယံ ၃ ခုတွင် (၁၆ ခုတွင်ထိပ်ဆုံး ၈ ဦး ဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး ကဲ့သို့ကျန်းမာသန်စွမ်းသည်၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ... Elite ရေကူးသမားလိုအပ်သောအရာများ။ ငါလည်းမိန်းကလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ရေကူးခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်တယ်။ ရေကူးခြင်းကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့ငါ့အာရုံကြောတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်အဲဒီအရာတွေကိုငါလုံးဝမပြခဲ့ဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလုံးဝမရှိသောကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သင့်သလော။ မှား!
ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးလေးနက်သောချစ်သူရည်းစားရခဲ့တယ်၊ ကျွန်မနမ်းတာထက်ပိုပြီးမလုပ်မချင်းတစ်နှစ်အကြာမှာကျွန်မတို့ချိန်းတွေ့ခဲ့တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး BJ ကိုရတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်မဟာ ၁၇ နှစ် (PMO ထဲကို ၄ နှစ်) ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ ငါနမ်းနေချိန်မှာငါ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမသွားတာနဲ့ချက်ချင်းကျလာလိမ့်မယ်။ ငါပထမအကြိမ်အလေးအနက်ပြုမူဆက်ဆံသည့်အချိန် (ထိုစဉ်က NoFap ကိုမသိခဲ့ပါ၊ PMO မှအနားယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏“ လိင်စိတ်နိုးထမှု” ကိုပြန်ရရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်) သုံးရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော် (အနည်းဆုံး ၈၀%) ထနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် blowjob တစ်ခုမှ O ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။
အဲဒီဆက်ဆံရေးကအဆုံးသတ်သွားတယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာကျွန်မရဲ့ PMO အလေ့အထကအဆိုးဆုံးတောင်ဖြစ်လာတယ်။ တစ်ပတ်လျှင်ငါးဆမှနေ့စဉ်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်တော်ဒီတစ်ခြားမိန်းကလေးနဲ့မတွေ့ခင်တစ်နှစ် (၉ လ) နီးပါးကြာခဲ့ပါပြီ။ ငါကတခြားမိန်းကလေး ၅ ယောက်နဲ့အတူရှိနေတယ်။ (ပါတီပွဲတွေမှာအနမ်းတွေသာငါနင့် ၆၀% ပဲရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲဒီအချိန်တုန်းကအဲဒီလိုလျစ်လျူရှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်) ကတည်းကငါ ED ကနေပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်မကလိင်ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီမှာကျွန်မဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှေ့မှာကျွန်တော့်ကိုဘာမှမရရှိနိုင်တဲ့ ၄၀% စိုက်ထူမှုနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်။
ငါနောက်ထပ် Streak (NoFap အကြောင်းကိုမသိသေးသော) ကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုတာကတော့ငါဟာကွန်ဒုံးမရှိဘဲနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့လုံလောက်တဲ့ခဲယဉ်းမယ်။ ပြီးတော့ငါအိုရဲ့အကြိမ်တစ်ဝက်လောက်ပဲလိုလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တွင် (၂ ပတ်အကြာတွင်ရှောင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ရေတွက်။ မရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မသိ) ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ၁၂ နာရီအတွင်းလိင်မှုကိစ္စ၌ ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည်။ ကွန်ဒုံးကိုမတင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်တခါတလေကျရှုံးပြီး DE ရှိနေသေးတယ်။
PIED နှင့်မဆက်စပ်သည့်အခြားအချက်များကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၂ လကထိုဆက်ဆံရေးသည်အဆုံးသတ်သွားပြီး PMO သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ တစ်နေ့နေ့စဉ် PMO သို့တစ်လအကြာတွင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာပြီးမိန်းကလေး ၄ ဦး နှင့်ချိတ်ဆက်မိသည်၊ သို့သော်အခြေအနေမှာဆိုးဝါးပြီးနမ်းနေစဉ်အမြင့်ဆုံး ၆၀% ရနိုင်သည်။
ငါ ၁၀ တန်းကတည်းကစိတ်ရှုပ်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါသူမငါ့ကို BJ မပေးနိုင်တာကြောင့်အခြေအနေကမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်နေ့မှာ YBOP ကိုတွေ့ပြီးကျွန်တော့်ပြproblemနာက PIED ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
ယခုငါ ၉ ရက်ရှိပြီ၊ မနေ့ကထိုကောင်မလေးနှင့်ထပ်မံတွေ့ဆုံသည်။ ပထမအကြိမ် (၅၀% သာရသည်) မရနိုင်သော်လည်းဒုတိယတစ်ခုတွင် ၁၀၀% စိုက်ထူမှုနှင့်ငါအိုရနိုင်သည်။ အစဉ်အဆက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ BJ ကနေ ed! သူမကကျွန်တော့်ကိုတကယ်တမ်းလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဆွေမျိုးတချို့ဆီကိုသွားမယ့်အချိန်ကစပြီးတစ်လအတွင်းမှာပဲတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
အခုတော့ငါထပ်မံတွေ့ဆုံမတိုင်မီငါ hardcore သွားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအချိန်အနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုမြင်သည်။ ငါအရင်ကထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ခံရတယ် ငါက ၃ ရက်ကတည်းက flatline မှာနေခဲ့ပေမယ့် ၈ ရက်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်။ အခုငါ Flatline ပျောက်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာတဲ့ဘဝပုံစံနဲ့အရင်ဘဝတွေဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်လည်ကျန်းမာလာအောင်ကူညီပေးနေသလိုခံစားရတယ်။ ကျနော့်ရည်မှန်းချက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုငါ့ဘဝကနေဖယ်ရှားပစ်ပြီးကွန်ဒုံးနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်သောပြန်လည် reboot ဇာတ်လမ်းကိုယောက်ျားများအားမျှဝေရန် ၈၁ ရက်အတွင်းဤပြည်သို့ပြန်လာနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်အချိန်ပိုလိုအပ်ပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ။ PIED ကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးအဲဒါကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်ငါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။
ငါတကယ်ပစ်ပစ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါဂရုမစိုက်ပါက fuck ဆိုတဲ့။ ဒါကြောင့်ငါက2ပတ်ကျော်အနည်းငယ်ပေါ့, အဘယ်သူမျှမ porn, အ jacking ချွတ်။ ဒီမိန်းကလေးနဲ့ ၂ ပတ်လောက်နေခဲ့ရတယ် သူမအသက် ၂၂ နှစ်ရှိပါပြီ၊ မကြာခင်ကျောင်းသွားတက်ပြီးလှပသောကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမလည်း မေတ္တာ ချစ်သူ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မရဲ့သနားစရာမြည်းအတွက်ငါပြန်လည်ထူထောင်တဲ့ porn / fap စွဲလမ်းနေသူဖြစ်ပြီး၊ ငါတစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါငါချက်ချင်းပြproblemနာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြောင့်ငါဒစ်ဟာအလုပ်မလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကောင်းပြီလူကြီးလူကောင်းမနက်ဖြန်မရှိသကဲ့သို့ငါဒီမိန်းကလေး fucked ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့် ၁၅ ရက်ကြာမှကျွန်တော့်ငပဲဟာပုံမှန်ပြန်လည်လည်ပတ်နေပုံရတယ်။ ငါ 15 နှစ်ခန့်ညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းမှုကနေရတယ်ဘယ်လောက်တက် fuck ဆိုတဲ့ပြီးနောက်ငါ၏အ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒပုံမှန်ပြန်ရရန်မည်မျှကြာမည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်လာပြီခဲ့သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးများကိုခေါင်းမော့ခိုင်းပါ။ ထိုမှောင်မိုက်သောမြည်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးတွင်အလင်းရှိပါသည်။
Zap Brannigan:“ Kif၊ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လုပ်ထားတာ၊ လူတွေကိုအသိပေးပါ။ ”
အဘယ်အရာကိုတိုးတက်မှုသင်သည် porn ပေါ်တက်ပေးခြင်းမြင်ပြီလော (Motivation လိုအပ်)
ငါဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ငါ့ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ငါကညစ်ညမ်းကိုရှောင်ရှားပြီးလှည့်စားခဲ့ဖူးတယ်။ ငါသေခြင်းချုပ်ကိုင်မှုနှင့်အတူပြissuesနာများစတင်ခဲ့ဒါကြောင့် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ငါ့ဘဝမှာအခြားအရာများနှင့်အတူအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နိုင်သည် ငါစာသားငါနောက်ဆုံးတော့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင်းလွန်ခဲ့သော3နှစ်ကအပေါ် shit ရှိကြောင်းလုပ်ဖို့စာရင်းရှိသည်။
ငါ့လက်ကိုဆွဲချခြင်းစစ်မှန်သောလိင်သည်ယခုပင်ကျေနပ်စရာကောင်းသည်။ ငါရှောင်ရှားရန်ယခင်ကသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်၎င်းကိုကျော်လွန်ရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အတိုင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်။
ကောင်းသောနံနက်အစ်ကို။ ငါသည်လည်းညစ်ညမ်းသောရှုထောင့်တိုင်းမှပျက်စီးသွားသည် (ပင်ပန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏လှပသောဇနီးကိုမချစ်ခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ pissed၊ ခါးသီးခြင်း၊ တွန့်ဆုတ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနိမ့်ခြင်း၊ လုံလောက်သောအာရုံမထားခြင်း၊ ငါ porn ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လူတိုင်းငါ့ကိုပတ်ပတ်လည်ပျော်ရွှင်သည်ကတည်းကငါအများကြီးပြုံး။ ကျွန်တော့်ဇနီးကငါဘာဖြစ်နေသလဲလို့တွေးနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကို porn အကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူး။ ငါပြန်လည်ရရှိလာတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်ကိုဝေမျှနေသော်လည်းသင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဦး အားမျှဝေရန်သတင်းမဟုတ်ပါ။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်စွဲစွဲလမ်းမှုကို“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းမခံရ” ရန်ဖြစ်သည်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးအခုလိုမျိုးသွေးဆောင်မှုကိုခံရတဲ့အခါငါဒီနေရာကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့“ fap group” မရှိဘူး။ ၎င်း၏ရှည်လျားသောခက်ခဲစစ်တိုက်ပေမယ့်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ အစ်ကိုဆက်လုပ်ပါ ဒီနေ့ဘာများလွယ်ကူတာလဲ
စိုးရိမ်စိတ်များလျော့နည်းလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပိုမိုလုပ်ဆောင်မှုများပိုမိုရရှိခြင်းတို့ကြောင့်လိင်သည်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သငျသညျ pornfree အခါ, စိုက်ထူပြproblemsနာများသွားပြီ။
nofap မတိုင်မီနှစ်ပတ်နှိုင်းယှဉ် nofap သို့ဇနီးနှစ်ပတ်အတွင်းနှင့်အတူလိင်
အနှေးခက်ခဲရဖို့, တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲရနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှိသော Semi-ခက်ရနိုင်: ခင်မှာ
အခုဆိုရင်: Solid သစ်မာ
ကျွန်မဤအရပ်ဌာနကိုတွေ့နိုင်အောင် fuck ဆိုတဲ့ဝမ်းသာပါတယ်!
ငါ 19 ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစွဲကနေအကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ကြရသည်ကတည်းကငါ 13 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်။5နှစ်အတွင်းအဘို့အဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ယခုနှစ်ငါပိုပြီးအလေးအနက်ထားတာစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်နှစ်ပတ်အတွင်းအတိတ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ဤအချိန်ကိုငါလှည့်ကွက်များထင်ပါတယ်။ ငါသာ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ပေမယ့်ငါနေတုန်းပဲတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် masturbate ။ နောက်ဆုံးညဥ့်ငါကိုတောင်တကယ်အရက်မူးသော်လည်းအလွန်ကြီးစွာသောလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကျောက်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်အဖြစ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ မပို ED !! ထိုအ 40days ကျော်မညစ်ညမ်း !!
တစ်လတဦးတည်း update ကို: အ Mojo ၏ပြန်သွား
ကိုယ့်ကိုငါက pop နှင့်အမှုအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပုံကိုအပေါ်လျင်မြန်စွာ update ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်မရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးကြိုးစားမှုပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုလွန်ကဲလာပြီးမကောင်းသောအကျင့်များထဲသို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်ခြင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲတွေကပြင်းထန်မှုသိပ်မရှိပါဘူး။ ငါဟာတစ်နေ့တာအတွင်းမထိန်းချုပ်နိုင်လောက်အောင်ချိုချိုသာသာဖြစ်သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်အချိန်ကကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ gf နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။
ငါတို့ဟာနေ့ခင်းဘက်မှာတော်တော်များများလိင်ဆက်ဆံနေတယ်၊ ​​ငါတို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်၊ ငါအဲဒီအချိန်ကာလတွေအကြားမှာအားပြည့်သွားတယ်၊ ငါကအော်ဂဇင်ကောင်းတဲ့ငါနင်ရင်းနှီးတဲ့အချိန်မှာငါမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုကုန်လွန်လေ့ရှိတယ်။ လိင်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အလွန်နီးကပ်သည်၊ ကာမဂုဏ်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ညသန်းခေါင်ယံအချိန်တွင်အိပ်ရာမှထ။ ကျပန်းထွက်အောင်စတင်ခဲ့သည်။
သူမကပိုပြီးပျော်ရွှင်ပြီးပိုပြီးလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ သူကအရမ်းတုံ့ပြန်မှုရှိပြီးငါစလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တယ်၊ ငါသူမသည်နောက်တဖန်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်တကယ်ပျော်တယ်ထင်ပါတယ်, ငါထပ်မံငါသို့, ငါလူရှုပ်လွဲချော်လျော့နည်းခြင်းနှင့်သူမနှင့်အတူလိင်မျှော်လင့်ခြင်းပိုနည်း။
ဒီတော့တိုးတက်မှုအားလုံးကကူညီပံ့ပိုးပေးသူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကကျွှန်တော်တို့ဟာဆက်နွှယ်မှုရှိဖို့အတွက်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ပဟေinိတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းအစတွေဟာနေရာတစ်နေရာပြိုလဲသွားသလိုခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် ၂၉ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး၊ ကျွန်ုပ်သည်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် porn ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ တဖြည်းဖြည်း၊ porn ကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်တောင်မှစိုက်ထူရန်ခက်ခဲသောပြhadနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါနှင့်ငါ၏လိင်ကြင်ဖော်များ၊ သို့သော်ယနေ့ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးအတင်းအဓမ္မစိုက်ထူတယ်။ ဒါဟာမိုက်မဲတဲ့အသံဘဲ၊